ShweMinThar: October 2017
Posted by Alex Aung at 10:14 AM No comments:
Full Credit to Dr. Richard Hla for his Contribution of all Tracks.
၁။ ကမ္ဘာအဝေး - ဟေမာနေ၀င်း
၂။ ကံကောင်းလို့ - ဟေမာနေ၀င်း
၃။ ကိုကိုချစ်ဝဲလည် - ဟေမာနေ၀င်း
၄။ ကိုကိုဒဏ်ပေးပြီ - ဟေမာနေ၀င်း
၅။ ကိုကိုဘာလို့မုန်းတာလဲ - ဟေမာနေ၀င်း
၆။ ကိုကိုမောင် - ဟေမာနေ၀င်း
၇။ ကိုကိုယောက်ျားမဟုတ်ဘူး - ဟေမာနေ၀င်း
၈။ ကိုကို့ကို - ဟေမာနေ၀င်း
၉။ ကိုကို့မျက်နှာ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၀။ ကိုယ်ချစ် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၁။ ကျွန်မမှာမိန်းမသား - ဟေမာနေ၀င်း
၁၂။ ကြင်နာသူလေး - ဟေမာနေ၀င်း
၁၃။ ကြိုက်သွားပြီ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၄။ ကျေပါကွယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၅။ ကျောင်းနေတုန်းကချစ်သူ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၆။ ကျောင်းပိတ်ရက် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၇။ ခရီးလမ်းသွားများ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၈။ ခရေပင်အောက်ကပိတောက်ချစ်သူ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၉။ ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော် - ဟေမာနေ၀င်း
၂၀။ ခွင့်မပြုနိုင်ဘူး - ဟေမာနေ၀င်း
၂၁။ ခွင့်လွှတ်နော်ကိုကို - ဟေမာနေ၀င်း
၂၂။ ချစ်ပါတယ်တဲ့ရှင် - ဟေမာနေ၀င်း
၂၃။ ချစ်ပါရဲ့လားမေးစမ်းချင် - ဟေမာနေ၀င်း
၂၄။ ချစ်ပွဲဝင် - ဟေမာနေ၀င်း
၂၅။ ချစ်ပြုံးစီခြယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၂၆။ ချစ်မြားရှင် - ဟေမာနေ၀င်း
၂၇။ ချစ်ရသည်ကသက်ထက်ဆုံး - ဟေမာနေ၀င်း
၂၈။ ချစ်ရေစင် - ဟေမာနေ၀င်း
၂၉။ ချစ်ရောင်ခြည် - ဟေမာနေ၀င်း
၃၀။ ချစ်သူ - ဟေမာနေ၀င်း
၃၁။ ချစ်သူစိတ်ကူး - ဟေမာနေ၀င်း
၃၂။ ချစ်သူ့နံနက်ခင်း - ဟေမာနေ၀င်း
၃၃။ ချစ်သောမောင်မောင် - ဟေမာနေ၀င်း
၃၄။ ချစ်သောသူသာလှများပန်း - ဟေမာနေ၀င်း
၃၅။ ချစ်ဦးသူသာသည်းဦးပန်း - ဟေမာနေ၀င်း
၃၆။ ချစ်၍ချစ်ခါလာသည်မှကွယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၃၇။ ချမ်းမြေ့ပါစေ - ဟေမာနေ၀င်း
၃၈။ ဂန္ထ၀င်ဆည်းဆာ - ဟေမာနေ၀င်း
၃၉။ ဂျင်းအပြာ - ဟေမာနေ၀င်း
၄၀။ ငယ်သူမို့ - ဟေမာနေ၀င်း
၄၁။ ငွေစင်ရော် - ဟေမာနေ၀င်း
၄၂။ ငွေလှိုင်းဇာခြည် - ဟေမာနေ၀င်း
၄၃။ ငြိမ်း - ဟေမာနေ၀င်း
၄၄။ စကားတက္ကသိုလ် - ဟေမာနေ၀င်း
၄၅။ စပါယ်ပွင့်ပြီမောင် - ဟေမာနေ၀င်း
၄၆။ စနေမှာရွာတဲ့မိုး - ဟေမာနေ၀င်း
၄၇။ စံပြမာလာ - ဟေမာနေ၀င်း
၄၈။ စဉ်းစားမှာပေါ့ - ဟေမာနေ၀င်း
၄၉။ စိတ် - ဟေမာနေ၀င်း
၅၀။ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက် - ဟေမာနေ၀င်း
၅၁။ စိမ်းလဲ့ကန်သာ - ဟေမာနေ၀င်း
၅၂။ စိုးစိတ်စိုးထိတ်လွမ်းချိန် - ဟေမာနေ၀င်း
၅၃။ စိုးနှောင့်ဗျာပွေ - ဟေမာနေ၀င်း
၅၄။ စိုးရိမ်လို့ပါ အချစ်ဦးရယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၅၅။ စောင့်သူ - ဟေမာနေ၀င်း
၅၆။ ဆောင်းကတ္တီပါ - ဟေမာနေ၀င်း
၅၇။ ဆောင်းကြာခြည် - ဟေမာနေ၀င်း
၅၈။ ဆောင်းရယ်နှင်းရယ်ကိုယ့်ချစ်သူရယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၅၉။ ဆောင်းအမီ - ဟေမာနေ၀င်း
၆၀။ ဇာတိနွယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၆၁။ ညများ - ဟေမာနေ၀င်း
၆၂။ ညှို့မျက်လုံး - ဟေမာနေ၀င်း
၆၃။ တကူကူးကူ - ဟေမာနေ၀င်း
၆၄။ တမာတောကိုပြန်ခဲ့ပါ - ဟေမာနေ၀င်း
၆၅။ တသိမ့်သိမ့်သူ - ဟေမာနေ၀င်း
၆၆။ တူရိယာလုလင် - ဟေမာနေ၀င်း
၆၇။ တို့အချစ်ကတစ်မျိုးပါနော် - ဟေမာနေ၀င်း
၆၈။ တင့်တင့်တယ်တယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၆၉။ တစ်ကမ္ဘာခြားလည်းချစ်နေမယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၇၀။ တစ်ပွင့်ပန် - ဟေမာနေ၀င်း
၇၁။ တစ်မိုးသစ်လေသောအခါ - ဟေမာနေ၀င်း
၇၂။ တစ်ယောက်တည်းနေ့တွေ - ဟေမာနေ၀င်း
၇၃။ တစ်ရေးချစ်ခွင့်မြင်ရနိုး - ဟေမာနေ၀င်း
၇၄။ တမ်းတသူလွမ်းရင်မော - ဟေမာနေ၀င်း
၇၅။ တိမ်လွှာမို့မိုလွင် - ဟေမာနေ၀င်း
၇၆။ တောသူလုပ်ငန်း - ဟေမာနေ၀င်း
၇၇။ တောင်ပြာတန်းကချစ်ရက်တွေ - ဟေမာနေ၀င်း
၇၈။ တောင်သူပျို - ဟေမာနေ၀င်း
၇၉။ ဒိုင်ယာရီဟောင်းရဲ့စာမျက်နှာ - ဟေမာနေ၀င်း
၈၀။ ဒေါက် ဒေါက် ဘယ်သူလဲ - ဟေမာနေ၀င်း
၈၁။ နှလုံးသား ကျမ်းစာ - ဟေမာနေ၀င်း
၈၂။ နေ့စဉ်ပိတောက်ပွင့်ပါစေ - ဟေမာနေ၀င်း
၈၃။ နွေမှာလာနေကျမောင်ရယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၈၄။ နွေလယ်ဒိုင်ယာရီ - ဟေမာနေ၀င်း
၈၅။ ပထမဆုံးအသဲကွဲဇာတ်လမ်း - ဟေမာနေ၀င်း
၈၆။ ပိတောက်စိမ်း - ဟေမာနေ၀င်း
၈၇။ ပိတောက်ရိပ်ဝယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၈၈။ ပင်လယ်ပြာနဲ့တံငါရွာ - ဟေမာနေ၀င်း
၈၉။ ပင်လယ်သီခေါင် - ဟေမာနေ၀င်း
၉၀။ ပန်းတမာလားချစ်သူလား - ဟေမာနေ၀င်း
၉၁။ ပန်းစေတီ - ဟေမာနေ၀င်း
၉၂။ ပန်းပိတောက်တွေကြွေရာမြေ - ဟေမာနေ၀င်း
၉၃။ ပန်းပိတောက်ရွှေဝါ - ဟေမာနေ၀င်း
၉၄။ ပန်းမာလာ - ဟေမာနေ၀င်း
၉၅။ ပန်းရနံ့လေးမှတစ်ပါး - ဟေမာနေ၀င်း
၉၆။ ပန်းလိုမွှေးပါမယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၉၇။ ပိုးဖလံ - ဟေမာနေ၀င်း
၉၈။ ပြဇာတ် - ဟေမာနေ၀င်း
၉၉။ ပြုံးတဲ့မေ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၀၀။ ပြုံးတုံ့လှယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၀၁။ ပြောရမှာကမိန်းမသား - ဟေမာနေ၀င်း
၁၀၂။ ပြောလိုက်ပါစန္ဒာ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၀၃။ ဖူးငုံချစ်ပန်း - ဟေမာနေ၀င်း
၁၀၄။ ဗေဠုဝ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၀၅။ ဘီလူးခေါင်းနဲ့မင်းသားလေး - ဟေမာနေ၀င်း
၁၀၆။ ဘယ်ရည်းစားကိုအချစ်ဆုံးလဲ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၀၇။ မ နဲ့ မောင် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၀၈။ မပြီးသေးသောပန်းချီကား - ဟေမာနေ၀င်း
၁၀၉။ မလိခချစ်သူ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၁၀။ မသွားပါနဲ့တော့လား - ဟေမာနေ၀င်း
၁၁၁။ မဲဇာမြိုင် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၁၂။ မိစိန်ပန်းလမ်းမှာကြွေနင်ဖြေစမ်း - ဟေမာနေ၀င်း
၁၁၃။ မုန်းတော့မုန်းချင်ပါရဲ့ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၁၄။ မိုးကလေးကညို - ဟေမာနေ၀င်း
၁၁၅။ မိုးကိုမျှော်သည် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၁၆။ မိုးညအိပ်မက် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၁၇။ မိုးဒေဝါ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၁၈။ မိုးပုလဲနဲ့တိမ်မည်းညို - ဟေမာနေ၀င်း
၁၁၉။ မိုးယံမှသည်ချစ်သူဆီသို့ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၂၀။ မိုးလုံးပတ်လည် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၂၁။ မိန်ရာသီ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၂၂။ မင်းလေး - ဟေမာနေ၀င်း
၁၂၃။ မယ်ခုမျှော် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၂၄။ မန်းတောင်ရိပ်ခို - ဟေမာနေ၀င်း
၁၂၅။ မန္တလေးရောက်ဖို့ တို့ကြိုးစားမယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၂၆။ မွန်တို့ဋ္ဌာနီ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၂၇။ မျက်ရည်ချိန်လက်မ ၃၀၀ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၂၈။ မျက်လုံးချင်းစကားပြောနေသည် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၂၉။ မျက်လုံးရိုင်း - ဟေမာနေ၀င်း
၁၃၀။ မျက်ဝန်းလဲ့ပြာပြာ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၃၁။ မေတ္တာကမ္ဘာများဖြင့်မခြားလိုပါ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၃၂။ မေတ္တာနုနုစေလိုသူရှင့် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၃၃။ မေတ္တာအသည်းပန်း - ဟေမာနေ၀င်း
၁၃၄။ မေတို့ပန်းကမ္ဘာ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၃၅။ မေ့ပါနိုင် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၃၆။ မေ့မှာတမ်း - ဟေမာနေ၀င်း
၁၃၇။ မောင် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၃၈။ မောင်မောင်လူဆိုးရယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၃၉။ မောင့်မူပိုင်ရှင် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၄၀။ မောင့်မျက်ရည်ဝိုင်း - ဟေမာနေ၀င်း
၁၄၁။ မောင့်အချစ်တော် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၄၂။ မြကေခိုင် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၄၃။ မြညှင်းလေပြေ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၄၄။ မြနန္ဒာ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၄၅။ မြန်မာ့ရှုခင်းမြန်မာ့စိတ်ရင်း - ဟေမာနေ၀င်း
၁၄၆။ ယုံကြည်ချက် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၄၇။ ယုံလား - ဟေမာနေ၀င်း
၁၄၈။ ယဉ်တစ်ကိုယ်မယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၄၉။ ရာသီတော်ဦး - ဟေမာနေ၀င်း
၁၅၀။ ရိုင်းတဲ့ဇင်ရော် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၅၁။ ရှေးရေစက် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၅၂။ ရွှေကံ့ကော် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၅၃။ ရွှေချိုးကူသံ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၅၄။ ရွှေချိုးဖြူ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၅၅။ ရွှေဂျိုးဖြူ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၅၆။ ရွှေတံငါ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၅၇။ ရွှေနှင်းဆီ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၅၈။ ရွှေနှင်းဆီ (၂) - ဟေမာနေ၀င်း
၁၅၉။ ရွှေဖိုးခေါင် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၆၀။ ရွှေဘိုသနပ်ခါး - ဟေမာနေ၀င်း
၁၆၁။ ရွှေမိုးညို - ဟေမာနေ၀င်း
၁၆၂။ ရွှေရင်တံခါး - ဟေမာနေ၀င်း
၁၆၃။ ရွှေလသာသာ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၆၄။ ရွှေလည်တိုင် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၆၅။ ရွှေဝါဖူး - ဟေမာနေ၀င်း
၁၆၆။ လက်ပန်ပွင့်ကောက် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၆၇။ လုပ်ပါဦးမေမေရယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၆၈။ လိုက်ခဲ့တော့ကွယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၆၉။ လိုက်ပါရစေအညာမြေ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၇၀။ လျှို့ဝှက်အချစ် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၇၁။ လှေကလေး - ဟေမာနေ၀င်း
၁၇၂။ ဝေးရတော့မှာလား - ဟေမာနေ၀င်း
၁၇၃။ သနားပါတယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၇၄။ သပြေတို့အရွယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၇၅။ သံသရာတစ်ကွေ့ဝယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၇၆။ သစ္စာနဲ့မေတ္တာလဲမယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၇၇။ သစ္စာပွင့်ပန်းလန်းရာမြေ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၇၈။ သဲငွေသောင် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၇၉။ သူကလေး - ဟေမာနေ၀င်း
၁၈၀။ သူဘယ်မှာလဲကွယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၈၁။ သုံးရာသီ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၈၂။ သုံးရာသီ (မူ ၂) - ဟေမာနေ၀င်း
၁၈၃။ သက်ဆုံးတိုင် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၈၄။ သက်ဆိုင်သူသို့ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၈၅။ သိပ်ကြိုက်တယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၈၆။ သိပ်သိချင်တယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၈၇။ အကြင်နာပိုသည်များရယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၈၈။ အချစ်စုဗူးလေး - ဟေမာနေ၀င်း
၁၈၉။ အချစ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး - ဟေမာနေ၀င်း
၁၉၀။ အချစ်နှင်သူလေးမေ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၉၁။ အချစ်ပိုရည်းစား - ဟေမာနေ၀င်း
၁၉၂။ အချစ်ပြီးတော့အချစ် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၉၃။ အချစ်ပျောက်မလေး - ဟေမာနေ၀င်း
၁၉၄။ အချစ်ဘယ်ကစ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၉၅။ အချစ်ရယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၁၉၆။ အချစ်သင်တန်းသူ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၉၇။ အချစ်ဦး - ဟေမာနေ၀င်း
၁၉၈။ အချိန်ရမှနားထောင်ပါ - ဟေမာနေ၀င်း
၁၉၉။ အချော့တော် - ဟေမာနေ၀င်း
၂၀၀။ အပြစ်တဲ့လား - ဟေမာနေ၀င်း
၂၀၁။ အဖေါ်မွန် - ဟေမာနေ၀င်း
၂၀၂။ အမုန်းခွန်အားပေးသနားပါ/မုန်းရစ်လေဦး - ဟေမာနေ၀င်း http://www.mediafire.com/file/5fnby25kplngemj/
၂၀၃။ အမေဘို့ - ဟေမာနေ၀င်း
၂၀၄။ အမေ့အိမ် - ဟေမာနေ၀င်း
၂၀၅။ အမေ့အိမ် (၂) - ဟေမာနေ၀င်း
၂၀၆။ အရှုံးမပေးနဲ့ ပြန်ကြိုးစား - ဟေမာနေ၀င်း
၂၀၇။ အရိပ်ပမာမခွဲခွာ - ဟေမာနေ၀င်း
၂၀၈။ အရိုင်းလေး - ဟေမာနေ၀င်း
၂၀၉။ အလှကမ္ဘာမြေဝယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၂၁၀။ အလွမ်းပန်းချီထဲကအတွေးအိမ် - ဟေမာနေ၀င်း
၂၁၁။ အသည်းကမ္ဘာ - ဟေမာနေ၀င်း
၂၁၂။ အသည်းတစ်ခြမ်းကိုလွမ်းဖို့သိမ်းထားမယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၂၁၃။ အသည်းနုတော့ကြောက်တာပေါ့ - ဟေမာနေ၀င်း
၂၁၄။ အသည်းနှလုံးကိုပြန်မေးကြည့် - ဟေမာနေ၀င်း
၂၁၅။ အာဖရိက - ဟေမာနေ၀င်း
၂၁၆။ အားနာပါတယ် - ဟေမာနေ၀င်း
၂၁၇။ အင်းတစ်လုံးတည်းပါ - ဟေမာနေ၀င်း
၂၁၈။ အင်းလျားကန်ကအကျော်ဆိုင် - ဟေမာနေ၀င်း
၂၁၉။ အင်းလေးမှာရွာတဲ့မိုး - ဟေမာနေ၀င်း
၂၂၀။ အုံးစက်ရာ - ဟေမာနေ၀င်း
၂၂၁။ အိပ်မပျော်သောညများ - ဟေမာနေ၀င်း
၂၂၂။ အိပ်မက်လှလှမက်ပါစေ - ဟေမာနေ၀င်း
၂၂၃။ အိပ်မက်လှလှမက်ပါစေ (မူ ၂) - ဟေမာနေ၀င်း
၂၂၄။ အိမ်မပြန်ချင်ဘူး - ဟေမာနေ၀င်း
၂၂၅။ ဥတုသုံးလီ - ဟေမာနေ၀င်း
၂၂၆။ ဦးလေးကြီး - ဟေမာနေ၀င်း
၂၂၇။ ၉၇၂ - ဟေမာနေ၀င်း
(The Famer Long Green Bean with Shrimp)
တောင်ပေါ်ယာခင်းတွေမှာ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ပဲတောင့်ရှည် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ခူးလာပြီး အပြန် ချောင်းထဲက သယ်လာတဲ့ ဘောကျိတ် ပုစွန် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်နဲ့အတူ ချက်စားတဲ့ ဟင်းဖြစ်ပါတယ်။ လတ်ဆတ်တာဆိုတော့ အရသာက သဘာဝအချိုကို ရရှိစေပြီး အချိန်တိုတို စားချင် ဖွယ်ရာကောင်းသော ဟင်းလျာတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်။ စည်အကြိုက် ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး အားလုံးလည်း ပြန်ချက်စားကြည့်လို့ရအောင် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
- ဘောကျိတ်ပုစွန် - ၁၀ ကျပ်သား
- ပဲတောင့်ရှည်(ပဲသီး) - ၃ စည်း
(အနေတော် အရှည်လေးများ ပိုင်းထားပါ)
- ငံပြာရည် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းခွဲ
- နံနံပင် - ၃ ပင်
၁။ ဟင်းအိုးထဲ ရေကို ပဲတောင့်ရှည် မြုပ်ရုံထည့်ကာ ပါဝင်ပစ္စည်း များအားလုံးထည့်ပြီး တည်ပါ။
၂။ ပဲတောင့်ရှည်အရမ်းနူးအိသည်အထိ မတည်ပါနှင့်။
၃။ ရေခန်းသွားလျှင် ဆားအပေါ့၊ အငန်မြည်းပြီး လိုတာထပ် ဖြည့်ပါ။ မီးဖိုပေါ်မှ ချပြီး နံနံပင်အုပ်ပါ။ ဗိုက်ဆာဖွယ်ရာ ဆွဲဆောင်မှုအနံ့လေးနှင့် ဟင်းတစ်ခွက်ရလာမှာပါ။
အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ငါးပေါင်းထုပ်အမျိုးအစားပေါင်း များစွာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံဒေသတွေမှာလည်း တစ်နေရာ နဲ့တစ်နေရာ မတူညီတဲ့ ငါးပေါင်းထုပ်တွေရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲမှ လူအများစု မသိသေးတဲ့ သထုံမျှစ်ငါးပေါင်းထုပ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ သထုံ ငါးပေါင်းထုပ်ကို တောင်ဇင်းရွက်နဲ့ ထုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ရဲယိုရွက်နဲ့ ထုပ်နိုင် သလို ငှက်ပျောရွက်နဲ့လည်း ထုပ်ပြီး ပေါင်းနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အမြင်မှာ ဆန်းပြီးလှနေဖို့အတွက် ခွက်ထဲမှာ ငှက်ပျောရွက်ခင်းပြီး ပေါင်း ထားပါတယ်။ အရသာကိုလည်း စပ်စပ်လေးဖြစ်နေဖို့အတွက် ငရုတ်သီး စိမ်းထည့်ပြီး ပေါင်းပါတယ်။
- ငါးကြင်း - ၃၃၀ ဂရမ်
- ဆား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်
- မျှစ် - ၂၀ဝ ဂရမ် (ပြုတ်ပြီးထားပါ)
- ကြက်သွန်နီ - ၉၅ ဂရမ် (ပါးပါးလှီးထားပါ)
- နနွင်းမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်
- အသားမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
- ဆန်မှုန့် - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
- ငရုတ်သီးစိမ်း - ၅ တောင့် (ပါးပါးလှီးထားပါ)
၁။ ငါးကို အနေတော်အရွယ်တုံးကာ ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်၊ နနွင်းမှုန့် အနည်းငယ်နှင့် ရောပြီး နယ်ထားပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ဒယ်အိုးအသေးတစ်လုံးထဲ ဆီထည့်ပြီး ဆီပူသည်နှင့် ငါးထည့်ကာ ဆီသတ် ပေးပါ။ ပြီးလျှင် ဆယ်ယူထားပါ။
၃။ မျှစ်ကို ပြုတ်ပြီး ဆယ်ယူထားပါ။
၄။ ပြီးလျှင် ဇလုံတစ်လုံးထဲ မျှစ်ထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် လှီးထားသော ကြက်သွန်နီ၊ ဆန်မှုန့်၊ အသားမှုန့်၊ နနွန်းမှုန့်နှင့် ငရုတ်သီးစိမ်းထည့်ပြီး နယ်ပါ။
၅။ ပြီးလျှင် ငှက်ပျောရွက်၊ ဒါမှမဟုတ် တောင်ဇင်းရွက်ထဲ နယ်ထားသော မျှစ်နှင့် ဆီသတ်ထားတဲ့ ငါးထည့်ပြီးထုပ်ပါ။
၆။ ပြီးလျှင် ပေါင်းအိုးထဲထည့်ပြီး မိနစ် ၃၀ ခန့် ပေါင်းပါ။
** (ပုံထဲမှာ ပါတဲ့အတိုင်း ခွက်ပုံစံအတိုင်း ပေါင်းမည်ဆိုလျှင် ခွက်တစ်ခွက်ထဲ ငှက်ပျောရွက် ၃-၄ ထပ်ခင်းပြီး အပေါ်မှာ ရှည်ထွက်နေတဲ့ ငှက်ပျောရွက်ကို လှန်ချပြီး သားရေပင်နှင့် စည်းထားပါ။ ပြီးလျှင် နယ်ထားတဲ့ မျှစ် အနည်း ငယ်နှင့် ဆီသတ်ထားတဲ့ ငါး ၃-၄ တုံးထည့်ပြီး ပေါင်းအိုးမှာ မိနစ် ၃၀ ခန့် ပေါင်းပါ။ ပြီးလျှင် ပေါင်းအိုးမှထုတ်ယူပြီး ငှက်ပျော ရွက်ခွက်နှင့် တည်ခင်းနိုင်သလို ငှက်ပျောခွက်ထဲမှ မျှစ်ငါးပေါင်း ထုပ်ကို ထုတ်ယူပြီးလည်း တည် ခင်းနိုင်ပါတယ်။
- အသားတု - ၁၀ ဥခန့် (ရေစိမ်ပြီး)
- ကြက်သွန်ဖြူ - ၃ မြွှာ
- ကြက်သွန်နီ - ၁ လုံး
- ပဲငံပြာရည် (အနောက်) - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
- သက်သတ်လွတ်ဟင်းခတ်မှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
- ဆား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သုံးပုံတစ်ပုံ
- ငရုတ်ကောင်းမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သုံးပုံတစ်ပုံ
- ပုံလုံသီး - ၁ လုံးခန့်
- ဆီ - စားပွဲဇွန်း ၃ ဇွန်း
၁။ ပဲပြား၊ အသားတုနှင့် ကြက်သွန်မြိတ်ကို နုပ်နုပ်စဉ်းပြီး ပုံလုံသီး (အနေတော်လှီးပြီး) ထဲ အဆာသွတ်ပေးပါ။
၂။ ကြက်သွန်ဖြူ/နီကို ကြိတ်ပြီး ဆီသတ်ပေးပါ။ အနံ့မွှေးလာပြီဆိုလျှင် ပဲငံပြာရည် (အနောက်)နှင့် အရသာများထည့်ပေးပါ။
၃။ ရေထည့်ပေးပါ။ ပြီးလျှင် အဆာသွတ်ထားသော ပုံလုံသီးများ ထည့်ပေးပါ။
၄။ အနံ့အရသာလည်း ပြည့်စုံလာပြီ၊ ပုံလုံသီးလည်းနူးလာပြီဆိုလျှင် ပန်းကန်ဖြင့် ပြင်ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ဆီးချို သွေးချို ရောဂါ ကို “ပျောက်စေ” ဆိုတဲ့ ဆေးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဓာတ်စာ ကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်ထင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကြားဖူးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်တွေ့ဆိုပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် ညွှန်းလာရင် လူနာ တွေက ချက်ချင်းလိုက်လုပ်ကြည့် ကြတာများပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီလိုနာတာရှည်ရောဂါကြီး၊ စားချင်တာ မစားရတဲ့ ရောဂါကြီး၊ ဝဋ်နာကံနာလို ခံစားနေရတဲ့ ရောဂါကြီး ၊ သက်တမ်းတိုနိုင်တဲ့ရောဂါကြီး၊ ငွေကုန်ကြေးကျများတဲ့ ရောဂါကြီး ကို တစ်ချက်တည်း အမြစ်ပြတ်ပျောက်ချင်လွန်းလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးချို သွေးချို ရောဂါ ဖြစ်နေပြီလို့ သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ လူနာတွေ ဘာလုပ်ကြသလဲဆိုတော့ အများအားဖြင့် အချို မစားတော့ဘူး၊ တစ်ချို့ကလည်း ထမင်း လျှော့စားတယ်။ ပြီးတော့ မိတ်ဆွေအိမ်နီးချင်းတွေ ပြောသမျှ ဆေးမြီးတိုတွေကို စမ်းကြည့်နေကြတာ မနည်းလှပါဘူး။
လူနာတွေထံက သူတို့ကြားဖူးတဲ့ ဆေးမြီးတို တွေ၊ သူတို့ကိုယ်တိုင် သုံးစွဲကြည့်ဖူးတဲ့ သို့မဟုတ် သုံးစွဲနေကြတဲ့ ဆေးမြီးတို တွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
တစ်ချို့လူတွေက သိပ္ပံနည်းနဲ့ သုတေသနလုပ်ဖူးထားလို့သိရတဲ့ သွေးချိုကျနိုင်တဲ့ ဆေးရွက် တွေကို သုံးနေတာရှိသလို ဘာမှလေ့လာဆန်းစစ်ထားတာ မရှိဘူးသေးတဲ့ ဆေးနည်းတွေကို လိုက်သုံးနေကြတာတွေ ကလည်း မနည်းပါဘူး။ ဘာဆေးတွေကြားဖူးသလဲဆိုတာ ဆက်လက်ဖော်ပြပါမယ်။
ပျားမြီးဆွဲရွက်၊ သကြားမကိုဋ်ရွက်၊ သင်္ဘောရွက်၊ ခရေရွက်၊ ငရုတ်ခါးရွက်၊ သနပ်ခါးရွက်၊ ခွေးတောက်ရွက်၊ ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်၊ တမာရွက်၊ ရဲယိုရွက်၊ ဆေးခါးကြီးရွက် စသဖြင့် အရွက် တွေကို ဝါးစားတာ၊ သုံးခွက်တစ်ခွက်တင် ပြုတ်ရည်ကို သောက်တာနဲ့ အရွက် ၁၀ မျိုးကြိတ်ဆေးတွေ ပြုလုပ်ပြီး သောက်နေကြတာတွေကို တွေ့ရှိနေရပါတယ်။ စစ်တမ်း ကောက်ကြည့်လိုက်ရင် အကြမ်းအားဖြင့် လူ ၁၀၀ မှာ ၇၅ ယောက်ကတော့ အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် စမ်းကြည့်ကြဖူးတာရှိပါတယ်။
တခြားကြားဖူးတဲ့ ဆေးမြီးတို တွေကတော့ –
– ကောက်ရိုး ကို ပြုတ်ထားတဲ့ အရည်သောက်သုံးတာ
– တညင်းသီး ကို ရေစိမ်ပြီးသောက်တာ
– သင်္ဘောသီး ကို ဖင်ကဖြတ်ကာ အခေါင်းပေါက်ထဲ ရေနွေးလောင်း ထည့်ထားပြီး ရေနွေးကြမ်းသောက်သလိုသောက်တာ
– ကြက်သား ကို သံပရာသီး အလုံးလိုက် ၄လုံး ထည့်ပြီး ပေါင်းစားတာ
– ရုံးပတီသီးကို ထိပ်ဖြတ်ပြီး ရေထဲစိမ်ထားတဲ့ အရည်သောက်တာ စသဖြင့် မျိုးစုံအောင် လုပ်ကြည့်နေကြတာ ရှိပါတယ်။
တခြား ထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ ဆေးမြီးတို တစ်ခုကတော့ နွားမ အနက်ရဲ့ ကျင်ငယ်ရည်ကို မှန်မှန်သောက်ရင် ဆီးချိုပျောက်ကင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည် ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယ အာယုဗ္ဗေဒ ဆေးကျမ်းမှာ နွားကျင်ငယ်ရည်ဟာ ရောဂါပေါင်းများစွာကို သက်သာပျောက်ကင်းစေတယ်လို့ ဖော်ပြထားပြီး ဒါကို ယုံကြည်ယူဆကြသူတွေ အတော်လေးရှိကြပါတယ်။ ဒီ အလေ့အထ ဟာ အိန္ဒိယ မှာ ရှေးနှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀ ကတည်းက သုံးစွဲခဲ့ကြတာလို့ ဆိုကြပါတယ်။ တချို့ကလည်း နံနက်မိုးမလင်းမီ ခံယူရရှိတဲ့ နွားမပျိုရဲ့ ကျင်ငယ်ရည်ကသာလျှင် ဆေးဖက်ဝင် တယ်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။ အများကိုလည်း ဒီဆေးနည်းဟာ တကယ်အစွမ်းထက်မြက်သလိုမျိုး အမွှမ်းတင်ကြတဲ့ သူတွေကြောင့် ဒီဆေးမြီးတိုဟာ ဆီးချို လူနာအများကြားမှာ ပြန့်ပွားနေပြီး တချို့လည်း စမ်းကြည့်ဖူးကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ္ပံနည်း တွေနဲ့ လေ့လာကြည့်ရာမှာ ဒီလိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားမရှိပါဘူး။ တချို့ကလည်း မိမိကျင်ငယ်ရည်ကို မိမိပြန်သောက်ရင် ကျန်းမာတယ်၊ ဆီးချို သက်သာတယ်လို့ ယုံကြည်သူတွေ ရှိကြပါသေးတယ်။ အခုလို ဆီးချို ဆေးကောင်းတွေ ရှိနေတဲ့ခေတ်မှာ ဒါတွေဟာ မသင့်တော်တော့ပါဘူး။
ဆီးချို လူနာရှင် အများစုဟာ-
၁။ ဆေးမြီးတို တွေကို ဘာကြောင့် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ပျောက်ကင်တဲ့ ဆေးလို့ ထင်မိကြတာလဲ။
၂။ ဘာကြောင့် ဒီလိုဆေးမြီးတိုတွေကို ယုံကြည်ပြီး သုံးစွဲနေကြတာလဲ။
၃။ ဒါတွေ သုံးစွဲရင် ဘာအကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။
၁။ ဆီးချို ကျသွားတယ်၊ ပျောက်ကင်းသွားတယ်လို့ ထင်ရတဲ့ အကြောင်းက ဒီလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ လူတွေရဲ့ သွေးတွင် သကြားဓာတ် ဒါမှမဟုတ် အချိုဓာတ်ဟာ ရေကန်ထဲက ရေပြင်လို တစ်ပြေးညီ တစ်နေ့လုံး တည်ငြိမ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့လူနာ တွေက နံနက်စောစော အိပ်ရာထတာနဲ့ ဆီးချိုစ စ်လိုက်လို့ အဖြေတစ်ခုခုရရင် တစ်နေ့လုံး ဒီလောက်ပဲ ရှိမှာပဲလို့ ထင်မိတတ်ကြပါတယ်။
တကယ်တော့ သွေးတွင်း သကြားဓာတ် တွေဟာ နိမ့်လိုက်၊ မြင့်လိုက်ရှိနေပါတယ်။ အစာစားပြီး တစ်နာရီခန့်မှာတော့ အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး စစားပြီး နှစ်နာရီမှာတော့ ပုံမှန်နီးပါး အစာမစားမီ် အနေအထားကို ပြန်ကျလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပင်လယ်က လှိုင်းတွေနဲ့ ပုံစံတူပါတယ်။ အစာစားပြီး ၂နာရီ အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ သွေးသကြားဓာတ်ဟာ ဂရပ်ဖ် (Graph) ပုံ ဆွဲလိုက်ရင် လှိုင်းလုံး တစ်လုံး တက်လာတာနဲ့ တူပါတယ်။ အစားနည်းရင် လှိုင်းလုံးသေးသေးတက်လာတာနဲ့တူပြီး အစားများရင် လှိုင်းလုံးအကြီးတက်လာတာနဲ့ တူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစာစစားတဲ့ အချိန်နဲ့ ကွာခြားလေလေ ဆီးချိုလှိုင်းလုံးကလည်း ကျလာလေလေဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေ့လုံး လိုက်စစ်ကြည့်နေရင် အဖြေပေါင်းများစွာ…သွေးချိုဓာတ်တွေ နိမ့်နေတာရော၊ မြင့်နေတာရော ရှိနေမှာပါပဲ။ ဒါဆိုရင် အဖြေတစ်ခုခု ဂဏန်းတစ်ခုခုကို ဖော်ပြတော့မယ်ဆိုရင် ဒုတိယ မေးခွန်းကတော့ ဘယ်အချိန်မှာ ဖောက်ထားတာလဲ၊ နောက်ဆုံး အစာနဲ့ ဘယ်လောက်ဝေးကွာချိန်မှာ ဖောက်ထားတာလဲ ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးချိုအမှတ်တွေဟာ ရှိသင့်တဲ့ဘောင် (Range) အတွင်းမှာ ရှိနေရင် လုံလောက်တယ်လို့သာ သတ်မှတ်နိုင်ပြီး အမြဲပြောင်းလဲနေတာဖြစ်လို့ တိတိကျကျ ဂဏန်းတစ်ခုတည်းကိုပဲ သတ်မှတ်ထားလို့ မရပြန်ပါဘူး။ ရှေးယခင်က ဖော်ပြပြီးဖြစ်တဲ့ ရှိသင့်တဲ့ သွေးတွင်း အချိုဓာတ်တွေကတော့ တစ်ညလုံး အစာမစားဘဲ အိပ်ရာနိုးလာတဲ့အခါ ဖောက်တဲ့ သွေးတွင်းသကြားဓာတ် (Fasting Blood Sugar) ဟာ ၉၀ မှ ၁၃၀ မီလီဂရမ် အတွင်း ရရှိရင် လုံလောက်ပြီး၊ အစာကြီး ဥပမာ…နံနက်စာ၊ နေ့လည်စာ၊ ညနေစာ ထမင်းစစားချိန်ကို မှတ်ယူပြီး အဲ့ဒီ အချိန်မှ ၂နာရီ ကွာခြားချိန်မှာ သွေးတွင်းသကြားဓာတ် စစ်လိုက်ပါက ၁၂၀ မှ ၁၈၀ မီလီဂရမ် အတွင်း ရရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တချို့လူနာတွေကတော့ မှတ်ရမှာ ရှုပ်တာကြောင့် ၁၈၀ မီလီဂရမ်၊ တချို့ကလည်း ၂၀၀ မီလီဂရမ် မကျော်ရင် ရပြီလို့သာ အကြမ်းဖျင်း အလွယ်တကူ မှတ်ထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ တကယ်စစ်လေ့ရှိတဲ့ အချိန်က နံနက်စောစော အိပ်ရာထမှာ စစ်ထားတဲ့ အဖြေတွေပဲ ဖြစ်နေတာများပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ၁၃၀ မကျော်ရဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်ကို မသိလိုက်ဘဲ ၂၀၀ မကျော်မချင်း ကျေနပ်နေကြတာ၊ မိမိဘာသာ ဆေးကုသ နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ နံနက်စာ မစားမီ ရတဲ့ အဖြေကို ၁.၅ ဒါမှမဟုတ် ၂ နဲ့ မြှောက်လိုက်ရင် အစာစားပြီး ရမယ့် အဖြေနဲ့ ညီတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ – အစာအစားမီ ၁၆၀ မီလီဂရမ် ရရှိလို့ သိပ်မဆိုးဘူးလို့ ထင်တဲ့သူတစ်ဦးဟာ အစာစားပြီး ၂နာရီမှာ ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ရင် ၂၄၀ မှ ၃၄၀ မီလီဂရမ်ခန့် ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အများဆုံး ထားရမယ့် ပမာဏ ၁၈၀ ကျော်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချိန် နှစ်မျိုးစလုံးကို တိုင်းတာကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဥပမာ – ဆေးမြီးတို သုံးစွဲတဲ့ လူနာတစ်ဦးဟာ ဆေးမသုံးမီ စစ်ကြည့်လို့ရတဲ့ ၃၀၀ မီလီဂရမ်ဟာ အစာစားပြီးခါစမှာ တိုင်းတာလို့ရတဲ့ အဖြေဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့။ ဆေးသုံးစွဲပြီးနောက်မှ ပြန်ဖောက်ကြည့်တာက နံနက်အိပ်ရာထ မစားခင်အချိန်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၆၀ မီလီဂရမ် ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် လျော့သွားတယ်လို့ ထင်မှားမိတတ်ပါတယ်။ စားပြီးချိန်မှာပဲ ပြန်တိုင်းကြည့်မှသာ နှိုင်းယှဉ်လို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ဂဃနဏမသိဘဲ အဟုတ်လျော့သွားတာ ထင်ပြီး ကြေညာမောင်းခတ်ကာ ဆေးမြီးတိုတွေ ပေးပြီးလိုက်ကုနေတဲ့ စေတနာ့ ဝန်ထမ်းတွေလည်း မနည်းပါဘူး။ လူနာက လူနာအချင်းချင်း ပိုယုံလွယ်ကြပါတယ်။ တချို့ဆီးချိုရှိမှန်းမသိသေးဘဲ ချိုတဲ့ အစာတွေနဲ့ ကစီဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစာတွေများစွာ စားထားပြီးမှ စစ်မိလို့ ရတဲ့ အဖြေဟာ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါလို့သတ်မှတ်တဲ့ ဘောင်ထဲဝင်သွားပြီး အစာဖြတ်လိုက်ရင် အလိုလျောက်ကျသွားကာ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်တတ်တာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါက ဆီးချိုမရင့်သေး၊ မကြာသေးတဲ့သူတွေမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဆေးမြီးတို သုံကြည့်တာနဲ့ ကြံကြိက်ပြီး ဆေးမြီးတိုကြောင့် ဖြစ်တာလို့ ထင်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုး တစ်ကြိမ်တစ်ခါတည်း ကြုံခဲ့ဖူးတာကို အမြဲ ဖြစ်နေတဲ့ သာဓက တစ်ခုလို ပုံကြီးချဲ့ပြီး အဖြစ်အပျက်ကို ပုံပြင်လေးနဲ့ ပြောလိုက်ရင် အဟုတ်ထင်တတ်ကြတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဘယ်သူဘယ်ဝါတော့ ဆီးချို အမြစ်ပြတ်ပျောက်သွားပြီလို့ ပုံကြီးချဲ့တတ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို အမှန်သိရင်တော့ ဆီးချိုယာယီငုပ်လျှိုးသွားတာက အပြီးပျောက်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ ရှင်းပြလို့ ရပါတယ်။
၂။ ဘာလို့လူနာတွေက အချင်းချင်းပြောတဲ့ ဆေးမြီးတိုတွေကို သုံးနေကြတာလဲ၊ ယုံကြည်နေကြတာလဲ ဆိုတာကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါဟာ အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီး နားလည်ရခက်တဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်လို့ ပညာတတ်သူတွေပင်လျှင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်ရခက်နေတာ ရှိပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကျန်းမာရေး ပညာနဲ့ သတင်းတွေကို လေ့လာတာ လိုက်စားတာ မရှိတဲ့ မြို့နယ်၊ တောရွာနေ လူနာတစ်ချို့အဖို့ ပိုပြီး ယုံလွယ်မှားလွယ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အထင်ကြီးအောင် သိန်းနဲ့ချီ တောင်းဆိုပြီး တစ်ခါစား လူလိမ်တွေ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကို အငိုက်မမိစေဖို့ သတိပေးလိုပါတယ်။
အဓိက ကတော့ လူနာတွေအတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဘက်က ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ ဖြန့်ဖြူးပေးရာမှာ အားနည်းမှုရှိနေတာကြောင့် ကျန်းမားရေးဝန်ထမ်းတွေ ဆီးချိုကုသရာမှာ စနစ်ကျတဲ့ ဆီးချိုသွေးချို ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု (Standard Diabetes Care) မပေးနိုင်သေးတာတွေကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။ ဒီလို စောင့်ရှောက်မယ့်သူ မရှိလို့ လူနာတွေ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်၊ ကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ ကိုယ့်အချင်းချင်း အကြံပေးပြီး ဆေးမြီးတိုတွေ မှီဝဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မယုံကြည်ရင်တောင်မှ ဟုတ်လိုဟုတ်ငြား စမ်းကြည့်ကြတာ မနည်းပါဘူး။ အယူအဆ လွဲမှားမှုတွေကို လုပ်နေတာ ဘာအကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာ ဆက်လက် ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။
၃။ မှားယွင်းတဲ့ အယူအဆတွေနဲ့ လမ်းလွဲနေခဲ့တာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အကျိုးဆက် နှစ်ခုရှိပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာ တကယ်ထိရောက်မှုမရှိတဲ့ ဆေးမြီးတိုတွေကြောင့် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ ဆီးချိုသွေးချိုထိန်းတာ၊ ထိရောက်တဲ့ ဆေးဝါးနဲ့ ကုသမှု မရှိခဲ့ဘဲ အချိန်တွေ ကုန်နေခဲ့တာတွေကြောင့် နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေ စောစောဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါသိရှိအောင် ဖော်ထုတ်ထားပြီးဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဆရာဝန်တွေထံမှာ ထိရောက်တဲ့ ဆီးချိုရောဂါ ပြုစုစောင့်ရှောက်ကုသမှုကို မခံယူခဲ့ရလို့ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေ များစွာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါရဲ့ အကောင်းဆုံးကုထုံးကတော့ “အစောဆုံး ရောဂါဖော်ထုတ်ပြီး သွေးချိုကို အမြဲတမ်း အထိရောက်ဆုံး ထိန်းထားနိုင်တာ” ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအခွင့်အရေးတွေကို အဆုံးရှုံး မခံသင့်ပါဘူး။ နောက်အကျိုးဆက်တစ်ခုကတော့ ဒီလို ဆေးမြီးတိုတွေ သုံးတာကြောင့် တခါတရံ ဆိုးကျိုးတွေလည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။ သဘာဝအသီးအရွက် တချို့ကလည်း အသည်းနှင့် ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်တတ်တဲ့ သာဓကတွေရှိပါတယ်။ အချိန်အဆမသိလို့ အလွန်အကျူးသောက်သုံးမိရင်လည်း အနည်းငယ် စားသုံးစဉ်ကနဲ့ မတူတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ (Overdose or toxicity)
နွားကျင်ငယ်ရေသောက်ရင် နွားရဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းမှ ပိုးတွေကိုလည်း သောက်မိပြီး ရောဂါ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ လွဲမှားပြီး သိပ္ပံနည်းမကျတဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကြောင့် ဆေးကုသဖို့ နှောင့်နှေးနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလို အယူအဆလွဲမှားနေတဲ့ ဆေးမြီးတိုလေးတွေ သောက်သုံးနေရင်းနဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ သွေးချိုထိန်းရမယ့် အချိန်တွေကို မကုန်ဆုံးစေသင့်ပါဘူး။
ဒီလိုဆေးမြီးတိုတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းခဲ့မိတဲ့ အသက် ၅၀ ရှိ ဒေါ်အေးမိဆိုတဲ့ လူနာတစ်ဦးရဲ့ အကြောင်းကို မှတ်သားဖွယ်ရာ တင်ပြအပ်ပါတယ်။
“ဒေါ်အေးမိက ဘယ်မြို့ကလဲ။ ဆီးချိုသွေးချိုရှိတာ ၄ နှစ်လောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ ဘာဆေးတွေသောက်နေလဲ ပြောပြပါဦး” လို့ ဆရာမကမေးလိုက်တော့ –
“ကျွန်မက မော်ကျွန်းကပါဆရာမ။ ကျွန်မကတော့ ဆီးချိုဖြစ်ကတည်းက အချိုဆို လုံးဝ ရှောင်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့ မိတ်ဆွေတွေပြောတဲ့ သဘာဝဆေးတွေကိုပဲ သောက်နေတာပါပဲ။
အရင်ကတော့ နေလို့ကောင်းတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းကျမှ မျက်စိတွေဝေဝါးပြီး ခြေထောက်တွေထုံလာလို့ လာပြကြည့်တာပါ။ ပြီးတော့မြို့က ဆရာဝန်ဆီမှာ စစ်ကြည့်တော့ သွေးတွင်း သကြားဓါတ်က ၄၀၀ကျော်ဖြစ်နေလို့ ဆရာမဆီ လွှဲပေးလိုက်တာပါ” လို့ ဒေါ်အေးမိက ပြန်ဖြေပါတယ်။
“အစုံပါပဲ ဆရာမရယ်၊ ကျွန်မ သိကြားမကိုဋ်ရွက်တွေ ဝါးစားဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ခရေရွက်ကို သုံးခွက်တစ်ခွက်တင် ပြုတ်ထားတဲ့ အရည်ကို တစ်နေ့ သုံးခါသောက်တယ်။ ကြက်သားနဲ့ သံပုရာသီး ၄ လုံး ပေါင်းပြီးလည်း စားဖြစ်တယ်။ ကြားသမျှတော့ စမ်းကြည့်တာပဲ။ အခုနောက်ပိုင်း သွေးချို ပိုတက်လာလို့ မိတ်ဆွေတစ်ဦးပြောတဲ့ နွားနက်အမရဲ့သေးကို နေ့တိုင်းသောက်ကြည့်သေးတယ်။ ပျောက်ချင်လွန်းလို့ မနည်းအောင့်ပြီး သောက်ခဲ့ရတာပါ ဆရာမရေ။ ဒါပေမယ့် တစ်လကြာပြီ၊ သွေးချိုက အခု ၄၀၀ မှတ်ကျော်လာလို့ ဆက်မသောက်တော့ပါဘူး”
ဒေါ်အေးမိရဲ့ အဖြေကြားတော့ ဆရာမ အတော်အံ့သြသွားပါတယ်။
“အို …နွားသေးဆိုတော့ တော်တော်လေး ရွံစရာကောင်းမှာပေါ့နော်။ မနည်းအောင့်ပြီးသောက်ရမှာပဲ။ ဒေါ်အေးမိ ဆီးချိုရောဂါ တကယ်ပျောက်ချင်မှန်း ဆရာမ နားလည်သွားပါပြီ။ အခုစစ်လိုက်တော့ ဆီးချိုများနေတာကို သိလိုက်တာပေါ့နော်။ အရင်ကရော စစ်လေ့ရှိလား”
“စစချင်းကတော့ ဆီးချိုကို အခုလိုစစ်ရမယ်ဆိုတာ မသိပါဘူး။ အချိုရှောင်ရင် သွေးမချိုတော့ဘူးလို့ ထင်မိတာ။ ဒီနှစ်ထဲကျမှ အိမ်နီးချင်းမိတ်ဆွေဆီမှာ ဆီးချိုစစ်တဲ့ စက်ကလေးဝယ်ထားလို့ တစ်ခါတစ်ခါ သွားစစ်လို့ရတော့မှ သွေးချို ၂၀၀ ဆိုတာ များမှန်းသိတာ”
“ပါးစပ်မှာ ချိုတဲ့ အရသာရှိတဲ့ အစာကို ရှောင်လိုက်ရုံနဲ့ ဆီးချိုပျောက်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ ပါးစပ်ထဲမှာ မချိုတဲ့အစာတွေ ဥပမာ ထမင်းဟာလည်း ဝမ်းဗိုက်ထဲရောက်သွားရင် သကြား (ဂလူးကို့စ်) စစ်စစ်တွေ ဖြစ်သွားတော့တာပဲ။ ဘာဆေးမြီးတိုပဲ သုံးသုံး အချိုပဲဖြတ်ဖြတ် ဆီးချိုကို လက်တွေ့တိုင်းကြည့်ရမယ်။ မထိရောက်ရင် စောစောပြုပြင်ပြီး ထိရောက်တဲ့နည်းကို ရှာရမယ်။”
“ကျွန်မကတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဆရာလုပ်ပြီး ကိုယ့်ဆေးမြီးတိုနဲ့ကိုယ် ဟုတ်လှပြီလို့ ထင်နေမိတာ။ ဆီးချိုတိုင်းပြီး ထိရောက်အောင် ထိန်းခဲ့ရမယ့် အချိန်တွေဖြုန်းနေမိတာ..နှစ်တွေမနည်းတော့ပါဘူး။ နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေများ ဝင်သွားပြီလား စစ်ဆေးပေးပါဦး ဆရာမ”
“ဒီနေ့မှ အမြင်မှန်ရတာလည်း နောက်ကျသွားတယ်ရယ်လို့ မရှိပါဘူး။ ဒီနေ့ကစပြီး ထိရောက်တဲ့ ကုထုံးတွေကို ယူလိုက်ရင် အကောင်းဆုံးမဖြစ်ရင်တောင် အဆိုးကြီးတော့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။”
(၁) ဆေးမြီးတိုတွေ၊ လွဲမှားတဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေ၊ ရှေးရိုးစဉ်လာ အယူအဆတွေ မျိုးစုံကို ကြားဖူး၊ ဖတ်ဖူးကြမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ဒါတွေဟာ အများအားဖြင့် သိပ္ပံနည်းစနစ်နဲ့ လေ့လာထားတာ မရှိကြပါဘူး။
(၂) ဘယ်အယူအဆတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် စမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင် ဆီးချိုထိရောက်အောင် ကျ၊ မကျ အမြဲတမ်းလက်တွေ့စစ်ဆေးကြည့်နေရပါမယ်။
(၃) သွေးတွင်းသကြားဓါတ်က အစာစားချိန်နဲ့ အနီးအဝေးပေါ်မူတည်ပြီး အမြဲပြောင်းလဲနေတာကို သတိပြုရပါမယ်။ ရရှိတဲ့အဖြေတစ်ခုတည်း ပုံသေအမြဲရှိရမယ်လို့ မှတ်ထားလို့မရပါဘူး။
(၄) ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ရင့်လာလေလေ ဆီးချိုမြင့်လာလေလေ ဖြစ်လာပါမယ်။ အစပိုင်းမှာ ဒီဆေးမြီးတိုတွေက သွေးချိုကျစေနိုင်ရင်တောင် နှစ်ကြီးလာရင်တော့ ဆီးချိုများလာမှာဖြစ်လို့ ပိုပြီးထိရောက်တဲ့ဆေးတွေကို စောစောကူးပြောင်းပြီးသုံးမှ အသက်ရှည်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(၅)ဆေးမြီးတိုတွေကို စမ်းသပ်နေရင်း အဖိုးတန်လှတဲ့ အချိန်တွေကို မဖြုန်းတီးမိစေဖို့ သတိပေးအပ်ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရား သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်က "၀က္ကလိရဟန်းတော်"ဟာ ဘုရားရှင်ကို အလွန်အမင်းကြည်ညိုတယ်။ ရဟန်းပြုတဲ့အချိန်ကစပြီး တရားဓမ္မသင်ယူအားထုတ်မှုကို လုံးဝမပြုဘဲ ဆွမ်းဘုဉ်းပေးချိန်ကလွဲရင် ကျန်တဲ့အချိန်တိုင်း မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို မြင်နိုင်လောက်တဲ့နေရာမှာ တည်နေပြီး စက္က၀က်ငှက်များဟာ လမင်းရဲ့အရောင်ကို မျက်တောင်မခတ်ကြည့် နေသလို ဘုရားရှင် မျက်နှာတော်ကိုသာ ကြည့်ရှု ဖူးမြော်နေလေ့ရှိပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားက “ ချစ်သားဝက္ကလိ၊ ဒီအပုပ်ကိုယ်ကြီးကိုကြည့်နေလို့ ဘာအကျိုး ရှိမလဲ။ တရားကိုမြင်သူသာ ငါဘုရားကို မြင်သူဖြစ်တယ်။ တရားကိုမမြင်သူဟာ ငါဘုရားကို တွေ့နေပေမယ့် မြင်ရသူမဟုတ်ဘူး တရားကိုကြည့်သူဟာ ငါဘုရားကို မြင်အောင် ရှုကြည့်သူဖြစ်ရမယ်”လို့ ဆုံးမတော်မူပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ မြတ်စွာဘုရားရှင်က မိမိကိုယ်ကိုရည်ညွှန်းပြီး “ဒီကိုယ်ပုပ်ကြီးကို ကြည့်နေလို့ ဘာအကျိုးရှိမလဲ”လို့ မိန့်ကြားတာကိုလဲ အထူးသတိပြုရပါမယ်။
အဆင်းရုပ်ဆိုတာ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဘယ်အရာဝတ္ထုမဆို ရုပ်တရားသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်တရားမှန်သမျှ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့ အဆင်းအသံစတဲ့ ရုပ်တရားကြီးဖြစ်စေ အဓိပတိပစ္စည်း တပ်လောက်အောင် အလေးအနက် အာရုံပြုတဲ့အခါ "ကုသိုလ်တရား" လုံးဝ မဖြစ်တဲ့အပြင် "ရာဂနှင့် ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ အကုသိုလ်တရားဆိုး နှစ်မျိုး"သာဖြစ်ရိုး ထုံးစံ ရှိပါတယ်။
ဒါကို သဘောကျ လက်ခံနိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့ ပဋ္ဌာန်းဒေသနာ-ကုသလတိတ်-ပဥှာဝါရ- အာရမ္မဏာဓိပတိပစ္စည်း ကျေးဇူးပြုပုံကို လေ့လာသဘောပေါက်မှ လက်ခံနိုင်မှာပါ။ ပဌာန်းဒေသနာတ်ာမှာ
“ရူပေ-သဒ္ဒေ-ဂရုံကတွာ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊
တံ ဂရုံ ကတွာ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ဒိဋ္ဌိဥပ္ပဇ္ဇတိ”တဲ့။
♦ ဘယ်လိုရုပ်အာရုံကိုဖြစ်စေ အလေးအနက် အာရုံပြုခဲ့ရင် သာယာနှစ်သက်မှုဖြစ်ပြီး "ရာဂနဲ့ ဒိဋ္ဌိ" သာဖြစ်တယ်လိုဟောတော်မူတာပါ။ တခြားနာမ်အာရုံတွေကို အလေးအနက်အာရုံပြုတဲ့အခါ နှလုံသွင်းအလျောက် ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အကုသိုလ်တရားနှင့် ရုပ်တရားတို့ကို အလေးအနက် အာရုံပြုရာမှာတော့ အကုသိုလ်တစ်မျိုးသာ ဖြစ်ရိုးထုံးစံရှိတယ်။
ကုသိုလ်လုံးဝဖြစ်ခွင့်မရှိပါဘူး။ အလေးအနက် မဟုတ်ဘဲ သဒ္ဓါတရားဖြစ်ရုံ အာရုံပြု တာကတော့ ကုသိုလ်လည်း ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်။
(ပဋ္ဌာန်း ပဥှာဝါရ-အာရမ္မဏ-အဓိပတိကို လေ့လာပါ။)
မြတ်စွာဘုရားရှင်က "၀က္ကလိရဟန်း" ကို အထက်ပါ အဆုံးအမနှင့် လွန်ကဲနေတဲ့ သဒ္ဓါတရားကို တားဖြစ်ဆုံးမပေမယ့် လိုက်နာခြင်း မပြုလို့ ၀ါဆို၊ ၀ါကပ်တဲ့နေ့မှာ “၀က္ကလိ ငါဘုရားနှင့်ဝေးရာကို ဖယ်သွားလော့”လို့ တိုက်ရိုက်နှင်ထုတ်လိုက်တယ်။
"၀က္ကလိရဟန်း" စိတ်ဓာတ်ကျပြီး" ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်စောင်း" က ခုန်ချဖို့ကြံစည်တာကို သိတော့မှ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကြွရောက်ပြီး ပူပင်သော ငြိမ်းအေးအောင် ဆုံးမတော်မူလို့ တရားကိုသိမြင်ပြီး ရဟန္တာဖြစ်တော်မူတဲ့အခါ ဘုရားရှင်ကို တကယ်တွေ့မြင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပါတယ်။
♦ နောက်တော့ "သဒ္ဓါတရား ကြီးမားလွန်ကဲတဲ့ ဧတဒဂ်ဘွဲ့" ရရှိခဲ့ပါတယ်။
♦ တကယ်တမ်းဘုရားရှင်နဲ့ တွေ့ဖို့ဆိုတာ ဘုရားရှင်ရဲ့ ရူပကာယတော်ကို မြင်ရတာကို အဓိကမထာဘဲ ဘုရားရှင်ဟောကြား တော်မူတဲ့အတိုင်း လိုက်နာကျင့်ကြံ သူများဟာ မိမိတို့ အကျင့်အသိနဲ့အညီ ဘယ်ခေတ် ဘယ်အခါ ဘယ်အချိန်မှာမဆို ဘုရားရှင် ကို တွေ့မြင်နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂုဏ်တော်ကို အာရုံပြုနိုင်ဖို့ သဒ္ဓါတရားကို နှိုးဆော်ဖို့အတွက် ရုပ်ပွါးတော်များကို ပူဇော်တဲ့နေရာမှာလည်း ဂုဏ်တော်ကို အဓိကထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဂုဏ်တော်ကွယ်ပြီး ပုံတော်အပေါ်မှာသာ အာရုံပြုလို့ကတော့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အဆုံးအမတော်နဲ့ တစ်ခြားစီ ဖြစ်နေကြပါပဲ။
♦ ဘုရားရှင်လက်တော်က ဘုရားရှင်ကို မျက်စိနဲ့ တွေ့မြင်ကြသူတွေဟာလည်း ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို မသိသူ၊ သိပေမယ့် လက်မခံသူတို့ ဟာ ဘုရားရှင်ကို တွေ့လွဲ လွဲကြသူတွေပဲ ဖြစ်သွားကြတယ်။ တကယ်တွေ့ခွင့်မရကြပါဘူး။ တစ်ချို့ဆို တွေ့လွဲရုံမကဘူး။ “တွေ့ကွဲ ကွဲကြပြီး” အ၀ီစိငရဲ အထိ ရောက်ကြသူတွေအကြောင်း ပိဋကစာပေတွေမှာ အထင်အရှား ပါပြီးသားပါ။
♦ ဘုရားရှင်ရဲ့ ပုံတော်တွေကို ဂုဏ်တော်ထိအောင် အာရုံပြု ကြည်ညိတတ်တဲ့ အတွက် ဘုရားရှင်နဲ့ တကယ်တွေ့ခွင့် ရသူတွေထဲက ရာဇ၀င်မှာ အမှတ်ထင်ထင် သတိထားမိသူ တစ်ဦးကတော့ ပဲခူး၊ ဟံသာဝတီခေတ်က ‘တလထော်’ဆိုတဲ့ မွန်အမျိုး သမီးတစ်ဦးပါ။
အဲဒီခေတ်က အုပ်ချုပ်တဲ့ ‘တိဿမင်း’ဆိုတာ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိသူဖြစ်လို့ ဘုရားရှင်ရဲ့ ဥဒ္ဒိဿရုပ်ပွားစေတီတွေကို ဖျက်ဆီးစေခဲ့ပါတယ်။ တချို့ ရေထဲမျော လုပ်စေတဲ့အခါ ရေထဲမျောနေတဲ့ ရုပ်ပွားတော်တွေကို ‘တလထော်’ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးကကြိုးကြိုးစားစား လိုက်ဆယ်ပြီး အိမ်ပေါ်မှာ ကိုးကွယ်ထားပါတယ်။ သူရဲ့ စိတ်အာရုံထဲမှာ ဆင်းတုတော်တွေကို အရုပ်လို သဘောမထားဘဲ ဘုရားရှင်လို့ပဲ သဘောထားတဲ့ အတွက် အခုလို လိုက်ဆယ်ပြီး အိမ်ပေါ် ပင့်ထားတာပါ။ ဒီအကြောင်းကို ဘုရင်တိဿမင်းသိတော့ သူ့အာဏာကို ဖီဆန်တယ်ဆိုပြီး ‘တလထော်’ကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ သတ်စေခဲ့ ပါတယ်။ ဆင်နဲ့ တိုက်တဲ့အခါမှာလည်း ဘယ်ဆင်မှ မတိုးဝံ့။ မီးနဲ့တိုက်လည်းမရ။ တွင်းတူးမြှုပ်လို့လည်း အကြောင်းမထူးအောင် ဖြစ်နေပါတယ်။
♦ အကြောင်းကတော့ အဲဒီအချိန်မှာ ‘တလထော်’က မြတ်စွာ ဘုရားရှင်ရဲ့ အဆုံးအမအတိုင်း သတ်မိန့်ပေးတဲ့ဘုရင်၊ သတ်ဖို့ အားထုတ်တဲ့ မင်းမှုထမ်း၊ ဆင်ထိန်း၊ ဆင်စတဲ့ သတ္တ၀ါအားလုံး မေတ္တာပို့သနေတဲ့အတွက် သူ့နှလုံးသားထဲမှာ ဘုရားရှင် ကိန်းဝပ်တည်နေတော်မူလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားရှင်တို့အပေါ်မှာ ပုံတော်ကို ထွင်းဖောက်ပြီး ဂုဏ်တော်ရောက်အောင် ကြည်ညိုတ်ကြလို့ နှလုံးသားထဲအထိ ဘုရားရှင် ကိန်းဝပ်ပြီး အသက်ကို သတ်ဖြတ်လို့ မရကြတဲ့ သားကောင်း၊သမီးကောင်းတို့အကြောင်းကို ပိဋကတ်တော်ထဲမှာလည်း အတော်များများ တွေ့ရပါတယ်။
ပုံတော်ထက် ဂုဏ်တော်ကို လေးစားကြည်ညို တတ်ကြပြီး လေးစားကြည်ညိုတဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့ အဆုံးအမကို လိုက်နာကျင့်သုံးသူမှန်သမျှ အခုအချိန်အထိလည်း ဘုရားရှင်နဲ့ တွေ့နေကြဆဲဖြစ်တယ်ဆိုတာ….
“တရားတော်ကို မြင်နေသမျှ ငါဘုရားရှင်ကို တွေ့မြင်နေသူဖြစ်တယ်”
ဆိုတဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့ အဆုံးအမတော်အရ ထင်ရှားသိသာတဲ့ အတွက် အချိန်မနှောင်းမီ ဘုရားရှင်နဲ့ အစစ်အမှန် တွေ့ခွင့်ရအောင် နည်းဟောင်း နည်းကောင်းများအတိုင်း ကြိုးစားအားထုတ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
CLA ဆိုတဲ့ဖြည့်စွက်ဆေးဝါးကို Fitness အသိုင်းအဝိုင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားဖူးနေကြပေမယ့် CLA အကြောင်း Beginner တွေအနေနဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်တော့မသိကြပါဘူး။ ဂရုပေ့ခ်ျတွေမှာ မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့သိမှတ်သလောက်ပြန်ရှယ်/ပြောဆိုနေကြတာတွေအများစုရဲ့အသိမှာပိန်ဆေးဆိုတာထက်ပိုမသိခဲ့ပါဘူး။ တချိုသူများအရမ်းစိုးရိမ်မိတာကတော့ ကိုယ်တွင်းကလီစာတခုခုထိခိုက်မှာတို့၊ ဘေးထွက်အန္တာရယ်တို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်ဟာဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်သလိုကာယဗလ Professional လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သို့ပေမယ့် ကျနော်ဖတ်ဖူး/မှတ်သားဖူးတာတော့ မျှဝေချင်တဲ့ဆန္ဒကြောင့် ဒီပို့စ်တွေရေးဖြစ်နေတာပါ။ ကျနော့်ရေးသားမူ့မှာ အသုံးပြုဖို့မညွန်းဆိုသလို မသုံးဖို့လည်းမတားမြစ်ပါဘူး။
ရည်ရွယ်ချက်က ဒီ Supplement ဟာဘယ်လိုအထောက်အပံပေးတယ်ဆိုတာ စာဖတ်သူကိုသိစေချင်တဲ့ဆန္ဒပါ။ ဖတ်ကောင်းအောင်ရေးခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဖတ်လွယ်/သိလွယ်/သဘောပေါက်လွယ်အောင်ရေးသားပါတယ်။ အရေးအသားကောင်းသူမဟုတ်တဲ့အတွက် တချို့နေရာများမှာ စာဖတ်သူအတွက်အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရင် တောင်းပန်ပါတယ်။ အမှားပါရင်ထောက်ပြဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
CLA ကိုပြန်ဆက်ကြရအောင်ဗျာ။ သုတေသနတွေ့ရှိမူ့တွေမှာတော့ အားကစားမျိုးစုံ ကစားသူများ၊ ကာယဗလသမားအတွက် အကျိုးအများကြီးရရှိပါတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။
Conjugated Linoleic Acid ဟာ ကြွက်သားကြီးထွားမူ့အတွက်လိုအပ်သော Linoleic acid (သို့) Fatty Acid တမျိုးပုံစံမှအနည်းငယ်ပြောင်းလဲထုတ်ယူထားတဲ့ဆေးတမျိုးပါ။ omega-6 fatty acid ဆိုတာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ ။ ကြွက်သားကြီးထွားမှုအတွက်လိုအပ်သောprotein ဖြစ်တည်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့fatty Acidတစ်မျိုးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Omega-6 ဟာခန္ဓာကိုယ်တွင်းအဆီများကိုလျော့ချနိုင်ရန်နှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်လိုအပ်သောဆဲလ်တည်ဆောက်မှုအတွက်အလိုအပ်ဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Conjugated linoleic acid (CLA) ဟာ potent anti-oxidant, anti-carcinogen, နဲ့ anti-catabolite ကိုသက်ရောက်မူဖြစ်စေပီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခံအားကိုလဲမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူအများစုကကောင်းကြောင်းညွန်းဆိုကြတာကတော့ CLA ဟာကြွက်သားတည်ဆောက်မူ့ကိုကူညီပေးပီးအဆီကိုလောင်ကျွမ်းစေဖို့ကူညီအထောက်ပံပေးသလိုကင်ဆာရောဂါကိုလည်းတိုက်ဖျက်ဖို့အကူအညီပေးပါတယ်။
CLA supplementation ရဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကတော့
၁။ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်နှုန်း(Metabolic Rate) ကိုတိုးတက်စေပါတယ်။ Metabolism ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်နှုန်းဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးမတူညီကြပါဘူး။ Metabolism မြင့်နေတာကြောင့် စားလိုက်တဲ့ကယ်လိုရီ လောင်ကျွမ်းနှုန်းပိုများပြီး စားသလောက်ပိုမဝနိုင်တာပါ။တစ်ချို့သူများစားတိုင်းမဝတာဟာ Metabolic Rate ဟာသဘာဝအတိုင်းအရမ်းမြင့်မားနေလို့ပါ။ Metabolism ဟာလူတစ်ဦးချင်းစီ၏ မျိုးရိုးဗီဇနှင့်နေ့စဉ်နေထိုင် လှုပ်ရှား မှုပုံစံတို့ပေါ်မူတည်၍ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်။ Metabolism နှုန်းကိုကယ်လိုရီ လောင်ကျွမ်းမှုပမာဏနှင့်တိုင်းတာကြပါတယ်။ Metabolism နှုန်းမြင့်မားလာမူ့ကြောင့်ဝိတ်လျှော့ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအဆက်ပြေပြစ်ဖို့စေဖို့ အားကစားမောင်မယ်များအတွက် အကောင်ဆုံးအကျိုးအမြတ်တခုပါ။
၂။ ကြွက်သားကြီးထွားဖို့အထောက်အကူပေးပါတယ်။ ကြွက်သားနဲ့ကပ်လျှက်မလိုအပ်တဲ့ အဆီများကိုလောင်ကျွမ်းစေခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းတို့ဟာ ဝိတ်လျော့ချဖို့ကြိုးစားနေသူများအတွက်အကြီးမားဆုံးအထောက်အကူတခုပါ။ အထူးသဖြင့် ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားများကို တိုးတက်မူ့ကိုကူညီလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
၃။ ကိုလက်စထရောပမာဏကိုလျော့နည်းစေပပါတယ်။ မျက်မှောက်ကာလမှာ လူတိုင်နီးပါးဟာ ကိုလက်စထရောကိုနည်းမျိုးစုံနဲ့ရှောင်ရှားနိုင်သလောက်ရှောင်ရှားနိုင်အောင်လုပ်ဆောင်နေကြပါပီ။ ဒါကြောင့် ကိုလက်စထရောပမာဏမြင့်မားနေသူများ(ဝနေသူ/အဝလွန်နေသူ)အဖို့ အကြီးမားဆုံးအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
၄။ သကြားဓာတ် သွေးထဲဝင်မှုကို လျော့နည်းအောင်ထိန်းပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီအချက်ကနေ ဆီးချိုသွေးချိုမဖြစ်စေဖို့နှင့်ဘော်ဒီဝိတ်မတက်စေဖို့အကာအကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၅။ အစားအစာနှင့်ပါတ်သတ်သော ဓါတ်မတည့်ခြင်း/ယားယံခြင်းဖြစ်ပေါ်မူ့များကိုလျော့နည်းစေပါတယ်။
၆။ ကိုယ်ခံအားကိုတိုးတက်စေပါတယ်။ ရောဂါပိုးမွှားအမျိုးစုံတိုက်ခိုက်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ ကိုယ်ခံအားတိုးတက်ဖို့ဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ပါ။
CLA ရဲ့အဓိကတုန်ပြန်မူတွေက မလိုအပ်တဲ့အဆီတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေဖို့ ဇီဝဗေဒဖြစ်စဉ်နှုန်းကိုမြင့်တင်ပေးပီး ကယ်လိုလီများကိုလောင်ကြွမ်းစေမူနဲ့အတူ သကြားဓာတ် သွေးထဲဝင်မှုရောက်မူ့ကို လျော့နည်းအောင်ထိန်းပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် မလိုလားအပ်တဲ့အဆီကိုလောင်ကျွမ်းပီး ဂလူးကိုစ် (glucose) နှင့် Fatty အက်စစ်များကို ကြွက်သားဆဲလ်များဆီသို့ကောင်းမွန်စွာရောက်ရှိဖို့လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ထိုလုပ်ဆောင်ချက်ရဲ့ရလဒ်ကတော့ အဆီနဲတဲ့ကြွက်သားဖွံဖြိုးမူ့ကိုမြန်ဆန်စေပါတယ်။
CLA မှာပါဝင်တဲ့ (Fatty Acids) ကိုသဘာဝအတိုင်းရရှိစေနိုင်တဲ့အသားအစာများကတော့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဆီ၊ အခွံမာသီးအစေ့၊ အမဲသား/ငါးနှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ အသားစားကြက်၊ ဥအမျိုးမျိုး၊ ပြောင်းဖူးဆီ၊ နေကြာစေ့နှင့်မြေပဲ တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးရဲ့အသုံးပြုပုံ၊ သုံးစွဲပုံကတော့ဆေးဗူးပါအညွန်းကိုသေချာစွာဖတ်ပါ။ အစာစားပြီးမှသောက်သုံးသင့်လျှင် အစာထဲမှာပါဝင်သောအဆီများနှင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိအဆီများကိုပါတပြိုင်နက်တည်းခြေဖျက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ စီနီယာသောက်သုံးနေသူများရဲ့အကြံဉာဏ်ရယူပါ။ ယနေ့အထိဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပြောဆိုသံမကြားမိသေးပါဘူး။ တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတာမမေ့လျော့ဖို့ သတိပေးအပ်တယ်။
၂၂ ဂျွန်လ ၂၀၁၆ (SGT 23:11)
Credit: GYM Professor
Crisis management ဖြစ်တဲ့အတွက် crisis ဆိုတာ ဘာလဲ၊ management ဆိုတာ ဘာလဲ တင်ပြဖို့လိုပါတယ်။ Crisis management ကို ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ management crisis လို့လဲ ပြောလို့ရပါတယ်။ Management crisis ကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာလည်း စဉ်းစားကြည့်စေချင်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ Crisis Management ကိုပဲ စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ပါ။
” Whatever you do will be insignificant, but it is very important that you do it” (Gandhi)
အခု တိုက်ခက်သွားတဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်းဖြစ်ရပ်မှာ အပြင်ကကြည့်တာမဟုတ်ပဲ ကိုယ်ကိုတိုင် ခံစားရတဲ့အခါ လူတွေအားလုံးဟာ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ လုပ်ကြတာချည်းပါပဲ။ ကိုယ်တတ်နိူင်တဲ့ဘက်ကနေ ၀င်လုပ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ၀င်လုပ်ကြတဲ့လူတွေကို ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တွေဟာ တကယ်တမ်း ထိရောက်ချင်မှ ထိရောက်မယ်၊ အရေးပါချင်မှ အရေးပါမယ်။ တစ်ခေါက်သွားရင် ခေါက်ဆွဲထုပ်လေးတွေဝေမယ်၊ ဆန်တစ်အိပ်၊ ဆီတစ်ပုံးပဲ လှူဒါန်းတယ်ဆိုတာတွေက အရေးမကြီးဘူး၊ သဘာဝမကျဘူးလို့ ထင်ချင်ထင်ပေမယ့် အဲ့ဒါ အရေးမကြီးပါဘူး။ ကိုယ်လုပ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေက ရပ်ကြည့်မနေကြဘဲ လုပ်ကိုလုပ်သင့်ကြပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်လိုက်တာကို တခြားသူတွေ သိတာ၊ မသိတာ အရေးမကြီးပါဘူး၊ အသိအမှတ်ပြုတယ်၊ မပြုဘူးဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး။ အရင်တုန်းကတော့ Credit ရှိမှ၊ အသိအမှတ်ပြုမှဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ လုပ်ကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ အမှန်တော့ မျှော်လင့်ချက်မထားဘဲ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်လိုက်တာမျိုးပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဒီအလုပ်ဟာ အရေးကြီးတယ်၊ အရေးမကြီးဘူး မစဉ်းစားပါနဲ့။ ငါတစ်ယောက်လုပ်လို့ရော ဘာထူးမှာလဲ ဆိုတာမျိုးလည်း မစဉ်းစားပါနဲ့။ လုပ်သာလုပ်ပါ။
လူငယ်၊ လူလတ်၊ လူကြီးတွေအားလုံး ကိုယ်လုပ်နေတာတွေဟာ ဘာမှ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးလို့ စိတ်ထဲမှာ ရှိနေပေမယ့်လည်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
3. National Crisis: Emergency Management
Crisis ကို သုံးမျိုးခွဲခြားပြပါမယ်။ ပထမဆုံးကတော့ Personal Crisis ပါ။ Crisis လို့ပြောရင် စိတ်ထဲမှာ တခြားနေရာကို တန်းရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါမျိုး မဖြစ်ရပါဘူး။ ကိုယ့်အထဲမှာ အရင်စဉ်းစားကြည့်ပါ။
ဒုတိယက Organizational Crisis ပါ။ ကုမ္ပဏီတွေမှာ၊ လုပ်ငန်းတွေမှာ Crisis တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကို စီမံခန့်ခွဲနိူင်ဖို့လည်း စဉ်းစားရပါမယ်။
တတိယကတော့ National Crisis ပါ။ နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဆိုရင် တကယ့် Crisis ကြီးပါ။ ဒါဟာ Emergency Management ပါ။
Crisis ပုံစံမတူပေမယ့် ရင်ဆိုင်ရတာတော့ အတူတူပါပဲ။ ဒါကို ဘယ်လိုကျော်လွှားရမလဲဆိုတဲ့ စဉ်းစားပုံ၊ စဉ်းစားနည်းကလည်း အတူတူပဲဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
လူတိုင်းဟာ Crisis တွေရှိလာရင် ကြောက်လန့်တတ်ကြပါတယ်။ Crisis ရှိလာရင် လူတွေဟာ စိတ်ပူကြပါတယ်။
တီဗီ၊ သတင်းစာနဲ့ ဂျာနယ်တွေမှာ မြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေကြရမှာပါ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ လောင်စာဆီအကျပ်အတည်း ဖြစ်နေပါပြီ။ တစ်လောကပဲ တရုတ်ပြည်မှာ ရေနံ၊ ဓါတ်ဆီဈေးကို ကိုင်တွယ်ရာမှာ အဆင်မပြေတဲ့အတွက် နယူးယောက်ဈေးကွက်မှာ ထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်နိူင်ငံမှာ ကံကောင်းလို့မရှိဦးတော့ တခြားနိူင်ငံတွေမှာ စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ လောင်စာဆီအကျပ်အတည်းက ရှိပါတယ်။ အာဖရိကန်နိူင်ငံတွေမှာဆိုရင် စားနပ်ရိက္ခာအကျပ်အတည်းရှိနေပါတယ်။ ဆင်းရဲတဲ့ နိူင်ငံတွေတင်မကဘဲ၊ အခုဆိုရင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုတွေ၊ ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကို တွေ့နေရပါပြီ။ ဒါကိုလည်း Crisis တစ်ခုအနေနဲ့ ပြောလို့ရပါတယ်
အခုဆိုရင် ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှုအကျပ်အတည်းလည်း ရှိလာပါပြီ။ သိသာသည်ဖြစ်စေ၊ မသိသာသည်ဖြစ်စေ တွေ့လာရတာတွေ ရှိပါတယ်။
၁၉၉၇ တုန်းက ထိုင်းမှာ စဖြစ်ခဲ့တဲ့ အာရှဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်းကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံး တုန်လှုပ်ချောက်ချားခဲ့ရပါသေးတယ်။ ထိုင်းကနေ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖီလစ်ပိုင် စတဲ့နိူင်ငံတွေပါ ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်းဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။
အခုလက်ရှိ demography ဟာ စဉ်းစားဖို့ကောင်းတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ။ လူဦးရေ ခြောက်ကုဋေလောက်ရှိနေပေမယ့် ရပ်သွားမှာမဟုတ်ဘဲ တိုးဖို့ပဲ ရှိတဲ့အတွက် လူဦးရေထူထပ်မှုကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်။ Land Space တွေကလည်း အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ ဒါ့ထက် တိုးလို့မရတော့ပါဘူး။ အကယ်ရ်ျ တခြားကမ္ဘာသွားနိူင်ရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ ကိုယ့်ကမ္ဘာထဲမှာပဲ နေရရင်တော့ ရတဲ့ Land Space က အကန့်အသတ်ရှိနေတဲ့အတွက် လူဦးရေထူထပ်မှု အကျပ်အတည်းရှိပါတယ်။
Human Security Crisis ရှိတာကို နိူင်ငံခြားသွားဖူးတဲ့လူတွေသိပါတယ်။ လေယာဉ်ကွင်းမှာ အရင်တုန်းက တစ်နာရီလောက် အချိန်ပေးရရင် အခု နှစ်နာရီ၊ သုံးနာရီလောက် အချိန်ကုန်ပါတယ်။ ဒါဟာ လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်ပါ။ စစ်ဆေးတာတွေ လုပ်ရတာကြောင့် Security Crisis ရှိပါတယ်။
AIDS ကို အခုဆိုရင် မြန်မာနိူင်ငံမှာလည်း ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာ တွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။ HIV/AIDS ဟာ တကယ့်ကို အာရုံစိုက်ရမယ့် Crisis ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီး မပတ်သတ်သလိုနေလို့မရပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ်ပြည်တို့ရဲ့ကြားမှာရှိနေတဲ့ မြန်မာနိူင်ငံအတွက် အိန္ဒိယရဲ့ HIV/AIDS Crisis နဲ့ တရုတ်ရဲ့ HIV/AIDS Crisis တို့ဟာ မြန်မာကို ရောင်ပြန်ဟက်နိူင်လို့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
လူတစ်ဦးချင်း၊ တစ်ယောက်ချင်းဟာ အသက်၅၀လောက် ရောက်လာရင် Crisis ၀င်လာပါတယ်။ ကလေးတွေက ကြီးလာမယ်၊ တက္ကသိုလ်တတ်တော့မယ်၊ ဒါမှမဟုတ် နိူင်ငံရပ်ခြားမှာ ကျောင်းသွားတတ်မယ် ဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ကြိုက်ကြိုက်၊ မကြိုက်ကြိုက် Mid-Life Crisis နဲ့ ကြုံတွေ့လာရပါတယ်။
လုပ်ငန်းတွေမှာ Succession Crisis ရှိကြပါတယ်။ လုပ်ငန်းတည်ထောင်သူ သဌေးရှိနေသရ်ျတော့ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ သူမရှိရင် သူ့နေရာမှာ ဘယ်သူဆက်လုပ်မလဲ။ CEO တစ်ယောက်ဟာ လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ လေး၊ ငါးနှစ်ကြာအောင် လုပ်ခဲ့တယ်။ သူမရှိရင်၊ သူပြောင်းသွားရင် Succession Plan Crisis ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Management မှာ Succession Plan ကို သင်လို့တောင် ရပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ ဦးဆောင်တဲ့သူ မသွားခင်စပ်ကူးမပ်ကူးကာလကို အဆင်ပြေအောင် ဘာလုပ်ထားမလဲ ဆိုတာ သင်လို့ရပါတယ်။
Crisis တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ Crisis တွေအားလုံးကို ခြုံကြည့်လိုက်ရင် Individual တစ်ဦးချင်းမှာ Crisis ရှိပါတယ်။ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတာ Personal Crisis ပါ။ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ ရာထူးမရလိုက်တာလဲ Personal Crisis ပါ။ ဒီတော့ Individual Crisis ဟာ လူတိုင်းမှာ တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုး ကြုံတွေ့နေရမှာပါ။ ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ စာမေးပွဲမအောင်ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် အောင်တာ့လည်း လိုအပ်တဲ့ အမှတ်မရဘူးဆိုတာတွေဟာ Individual Crisis ပါပဲ။
မိသားစုထဲမှာလည်း Crisis ကြုံရပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ခင်နွေးထွေးတဲ့မိသားစုဖြစ်နေပါစေ Crisis ရှိပါတယ်။
မိသားစုက တဆင့်တတ်လိုက်ရင် Community မှာ Crisis ရှိပါတယ်။ လူအသိုင်းအ၀ိုင်းတိုင်းမှာ Crisis ရှိပါတယ်။
အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်း Crisis ရှိပါတယ်။ Management တာဝန်ယူရတဲ့အခါ Organizational Crisis ကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာဟာ အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
National Crisis ဆိုတာလည်း ရှိပါတယ်။ အခု နာဂစ်လိုမျိုးပါ။
နောက်ဆုံးတစ်ခုက Global Crisis ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်ရော လူကြီးပါ Globalization ခေတ်မှာ နေကြရတဲ့အတွက် Global Crisis ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကို မေ့လို့မရပါဘူး။ ဘာကြောင်လဲဆိုတော့ Global Crisis ကြောင့် National Crisis ဖြစ်နိူင်ပါတယ်။ National Crisis ကြောင့် Organizational Crisis ဖြစ်နိူင်သလို Community Crisis ဖြစ်နိူပါတယ်။ အဲ့မှတဆင့် Family Crisis ဖြစ်နိူင်တယ်၊ Individual Crisis ဖြစ်နိူင်ပါတယ်။
Individual Crisis နဲ့ ပတ်သတ်လာရင် ထူးဆန်းတာတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် တစ်ဦးချင်း၊ တစ်ယောက်ချင်း အပြုအမူ မဆင်ခြင်လို့ HIV/AIDS ဖြစ်လာတဲ့ Personal Crisis က မိသားစုကို လာထိခိုက်ပါတယ်။ မိသားစုတွေကို ထိခိုက်လာရင် Community ကိုလည်း ထိခိုက်လာပါတယ်။ Community ကိုထိလာရင် Organization ကိုထိပါတယ်။ National ကိုထိပါတယ်။ Global ထိတယ်။ ဒီတော့ Level of Crisis ကိုကြည့်ရင် Level တွေ အားလုံးဟာ ဆက်စပ်မှုရှိနေတယ်ဆိုတာ သိထားရမယ်။ တစ်နေရာတည်းရပ်လို့ မရပါဘူး။ Individual Crisis မှာ ထိန်းနိူင်အောင် ထိန်းရပါမယ်။ ဒါမှမဟုတ် Family, Community, Organization အစရှိသဖြင့် ထိန်းသွားရပါမယ်။
ဒီနေရာမှာ Individual Crisis, Organisational Crisis နဲ့ National Crisis သုံးခုကိုပဲ အဓိကထား တင်ပြသွားပါမယ်။
Personal Crisis ကို စဉ်းစားရင် ပထမဆုံး Crisis ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို အရင်စဉ်းစားရပါမယ်။
“Testing” ကိုယ့်ကိုယ်ကို အစစ်ခံတဲ့အချိန်ဟာ Crisis ပါပဲ။ ပုံမှန်အနေအထားရှိတဲ့အချိန်မှာ Crisis မရှိပါဘူး။ ပုံမှန်အနေအထား မဟုတ်တော့တဲ့အချိန်ကျရင် Crisis ဖြစ်လာပါပြီ။ အရေးပေါ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ Crisis ပါပဲ။
ဒီတော့ Crisis ရဲ့ Definition ကို ဖွင့်ရအောင်ပါ။ ဒီနေရာမှာ definition နဲ့ပတ်သတ်လို့ နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။ ဒီမှာက definition ကို သိပ်သတိမထားကြပါဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပြောနေကြပေမယ့် ဘာပြောနေမှန်းမသိတာဟာ Define မလုပ်လို့ပါ။ အမြဲတမ်း သတိထားပြီး define လုပ်ပါ။ define လုပ်ပီးမှပြောရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှုရှိပါမယ်။ သူ့ Definition နဲ့ ကိုယ့် Definition မတူရင် ညှိလို့ရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဥပမာတစ်ခုပြောပြပါမယ်။ ရန်ကုန်မြို့ကို တစ်ခေါက်မှ မရောက်ဖူးတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ရန်ကုန်မြို့ထဲလည်ချင်တယ်ဆိုလို့ သူ့ကိုဆူးလေဘုရားလမ်းမှာ ချပေးလိုက်ပြီး သူ့လက်ထဲကို မန္တလေးမြို့မြေပုံထည့်ပေးလိုက်တယ် ဆိုကြပါစို့။ သူ ဘယ်မှ ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ မြေပုံက မှားနေတာကိုး။ ဒီတော့ လူတွေမှာရှိတဲ့ mental plan က အရေးကြီးပါတယ်။ အဲ့မြေပုံက definition ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ဒီမြေပုံက မန္တလေးမြေပုံဖြစ်တဲ့အတွက် ရန်ကုန်မှာ သုံးလို့မရဘူးဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီ့အတွက် definition of issue ဟာ အရေးကြီးပါတယ်။
အကျပ်အတည်းဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကို ကြိုပြီးမသိနိူင်ပါဘူး။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းတာမျိုး လုပ်လို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လုံးဝမမျှော်လင့်ပါဘူးလို့တော့ ပြောလို့မရပါဘူး။ Crisis က လာမှာပါပဲ။ Individual မှာလည်း ရှိမှာပဲ၊ Family မှာလည်း ရှိမှာပဲ၊ Community မှလည်း ရှိမှာပဲ။ Organization နဲ့ National မှာလည်း ရှိမှာပါပဲ။ ဒီတော့ ခြုံပြီးပြောရရင် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကို အန္တရာယ်ပေးနိူင်တာကို Crisis လို့ ကြိုပြီး စဉ်းစားလို့ရပါတယ်။
Crisis ကို တရုတ်လို စကားနှစ်ခုနဲ့သုံးပါတယ်။ တစ်ခုက အန္တရာယ်ပါ။ Crisis ဆိုတာ အန္တရာယ်ကြီးပါ။ အန္တရာယ် ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်သလဲဆိုတော့ ရှောင်ရင် ဖြစ်ပါတယ်။ ရှောင်ရင် အန္တရာယ်ပါပဲ။ Personal Crisis ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Family Crisis ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ National Crisis ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Global Crisis ပဲဖြစ်ဖြစ် တော်တော်များများက ငြင်းကြပါတယ်၊ မရှိဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါဟာ အန္တရာယ်ကို ရှောင်တာပါ။ အဲ့ဒီလိုဆိုရင် အန္တရာတယ်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တရုပ်စကားက နက်နဲပါတယ်။ ဒုတိယစကားလုံးက အခွင့်အရေးလို့ အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်။ နာဂစ်မုန်တိုင်းဟာ ယူတတ်ရင် အခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုပါ။
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း၊ တစ်ယောက်ချင်းမှာရော၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပါ အခက်အခဲရှိလာလို့ ကြောက်ပြီးရှောင်ရင် အဲ့ဒါ အန္တရာယ်ပါပဲ။ မကြောက်ဘဲ ရင်ဆိုင်ရင်၊ ကိုယ့်အတွက် အသုံးချနိူင်ရင် ဒါဟာ အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပါပဲ။ အလုပ်ပြုတ်တာ အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပါပဲ။ ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ရဖို့၊ နောက်အလုပ်သစ်တစ်ခုရဖို့ အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပဲလို့ စဉ်းစားကြည့်ကြစေချင်ပါတယ်။
အမြဲတမ်း အခွင့်အလမ်းကိုပဲ ကြည့်ပါ။ အန္တရာယ်ကို မကြည့်ပါနဲ့။ အန္တရာယ်ကို ကြည့်လိုက်မိရင် ကြောက်ပြီး ရှောင်မိပါလိမ့်မယ်။
Crisis ကို ဖော်ပြတဲ့ တရုတ်စာလုံးကို မမှတ်မိရင်တောင် danger and opportunities ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုတော့ မှတ်မိစေချင်ပါတယ်။ Danger နဲ့ opportunity ဟာလည်း သီးခြားစီ ရှိနေတာမဟုတ်ပဲ တွဲနေတာကို သတိထားပါ။ Crisis ကို ရင်ဆိုင်တဲ့အခါ ဒါကို ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်သလဲဆိုတာပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်တာကောင်းရင် အခွင့်အလမ်းဖြစ်လာမယ်။ ကိုယ် စီမံခန့်ခွဲမှု မလုပ်တတ်ရင်တော့ အန္တရာယ်ဖြစ်လာပါမယ်။
Affect all segments of society
Caused byawide range of reasons
Crisis ဟာ လူတိုင်းမှာရှိသလို Crisis ဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလည်း အများကြီး ရှိနိူင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် common elements သုံးခုပဲ ရှိပါတယ်။ A threat to society လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အန္တရာယ်ပြုတယ်။ The element of surprise မထင်မှတ်ဘဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ A short decision time တုံ့ပြန်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်ကျတော့ သိပ်နည်းနေတယ်။ အချိန်ယူ စဉ်းစားပြီး အစီအစဉ်ဆွဲလုပ်လို့မရဘူး။ Crisis မှာ အချိန် ဇိမ်ပြေနပြေယူပြီး စိတ်တိုင်းကျ ဒါကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မယ်။ ဒါကို ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အနေအထား မရှိပါဘူး။
လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် Crisis က တွဲပါလာတာ မဆန်းပါဘူး။ နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းရဲ့ Crisis ကို အခုဆိုရင် ခံစားဖူးကြသလိုပါပဲ။ Personal Crisis ကို ပြောရင် နေမကောင်းဖြစ်တယ်၊ မကျန်းမာဘူးဆိုတာလည်း Crisis ပါပဲ။ သေမယ်၊ ပျက်စီးတယ်၊ ဆုံးရှူံးတယ်ဆိုတာလည်း Crisis ပါပဲ။ ဒီတော့ လူတိုင်းဟာ Crisis ကြုံရပါတယ်။ ဒါကို အဆန်းလုပ်ပြီး ပြောမနေပါနဲ့။ အခုမှ Crisis Management မသင်ပါနဲ့။ Crisis က ရှိနေမှဖြစ်တဲ့အတွက် Crisis Management မသင်လည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် manage လုပ်ရမှာပါပဲ။
ဘာကြောင့် Crisis ဖြစ်သလဲလို့ စဉ်းစားရင် Focus နှစ်ခု ကြည့်ရပါမယ်။ အလုပ်တစ်ခုက အရေးကြီးတယ် (Important)၊ နောက် အမြင် dimension က ချက်ချင်းလုပ်ရမယ် (Urgent)။ လုပ်ငန်းတိုင်းမှာရော၊ personal မှာပါ အလုပ်တစ်ခုဟာ အရေးလည်းမကြီးဘူး၊ ချက်ချင်းလည်း လုပ်စရာမလိုဘူးဆိုရင် အဲ့ဒီအလုပ်မျိုးကို မလုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အခုလက်ရှိမှာ လူတော်တော်များများက အရေးမကြီးတာလည်းသိတယ်၊ ချက်ချင်းလုပ်စရာမလိုမှန်းလည်းသိတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါကိုပဲ လုပ်နေကြတယ်။ အဲ့ဒီလိုအလုပ်မျိုးတွေ လုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။
အရေးမကြီးဘူး၊ ချက်ချင်းလုပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးကျတော့ နည်းနည်းလျှော့လို့ရပါတယ်။ အရေးကြီးတယ်၊ ချက်ချင်းလည်းလုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Crisis Management လိုလာပါတယ်။ အကောင်းဆုံး အချိန်ကို အသုံးပြုစေချင်တာကတော့ အရေးကြီးတယ်၊ ချက်ချင်းလုပ်စရာမလိုတဲ့အရာမျိုးပါ။ ဥပမာ – ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ နေတာပေါ့။ မိသားစုကို တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင် မိသားစုနဲ့နေတဲ့အချိန်ဟာ အရေးကြီးတယ်။ အားကစားလုပ်တာလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ချက်ချင်းလုပ်စရာတော့ မလိုပါဘူး။ ကျန်းကျန်းမာမာဖြစ်နေဖို့ လိုပါတယ်။ ပိန်လှီနေရင် Crisis Management မပြောနဲ့ ကျန်တာ ဘာမှလုပ်လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Crisis ရှိရင် တစ်ဦးချင်း၊ တစ်ယောက်ချင်း တုံ့ပြန်မှုလုပ်တဲ့ပုံစံချင်း မတူပါဘူး။ အခြေအနေတူတာမျိုး တွေ့တာချင်း တူရင်တောင် ခံစားရတာ၊ တုံ့ပြန်တာချင်း မတူပါဘူး။ ဥပမာ- လူနာတစ်ယောက်ဟာ စိတ်သောကဖြစ်တယ် ဆိုပါစို့။ စိတ်သောကဖြစ်ရင် Crisis ဖြစ်တာပါပဲ။ Crisis ဖြစ်တာကို တုံ့ပြန်တာမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကို စဉ်းစားရမယ်။
Crisis ဖြစ်တဲ့အခါမှာ ကြောက်လာပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ကင်ဆာဖြစ်နေပြီဆိုရင် ကြောက်လာပါတယ်။ ဒါဟာ Crisis ပါပဲ။ ဒီထက်ကြီးမားတဲ့ Crisis မရှိတော့ပါဘူး။ HIV positive ဆိုရင်လည်း ကြောက်တာပါပဲ။ ဒါ တစ်ဦးချင်း စဉ်စားတာပါ။
နောက်တစ်ခုက ဖိစီးမှုပါ။ Stress လို့ပြောရင် မကောင်းတဲ့ဖိစီးမှုကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းတဲ့ဖိစီးမှုကို ပြောတာပါ။ အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေမှာ ဖိစီးမှုလိုပါတယ်။ ဖိစီးမှုမရှိရင် စိန်ခေါ်မှုမရှိတော့ပါဘူး။ ကိုယ်တတ်တာတွေပဲ ဖတ်နေရင် အလကားပါပဲ။ ကိုယ်မတတ်တာဖတ်ရင် ဒါဟာ ကောင်းတဲ့ဖိစီးမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်မသိသေးတာကို လေ့လာရင် ဖိစီးမှုကောင်းပေါ့။ မကောင်းတဲ့ဖိစီးမှုကတော့ မလိုတာတွေမှာ ဦးနှောက်စားနေတာမျိုးပါ။
နောက်တစ်ခုက Post Traumatic Stress Disorder ဆိုတာပါ။ ဒါကို ဆရာဝန်တွေသိပါတယ်။ PTSD ဆိုတာ ရှိကြပါတယ်။ အိမ်မှာ မိဘဆုံးသွားရင် စိတ်သောကတွေ ရှိလာမယ်။ ပြီးရင် ကိုယ်ေ၇ာစိတ်ပါ မကျန်းမာမှုတွေ ဖြစ်လာပါမယ်။
နောက်တစ်ခုက ဒေါသကြီးမယ်။ ဒါဟာ အကျပ်အတည်းဖြစ်လာလို့ တုံ့ပြန်တာပါ။ အကျပ်အတည်းဖြစ်လာပြီဆိုရင် ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်မှုအဆင့်တွေမှာ ပထမဆုံးက မဖြစ်နိူင်ဘူး၊ မယုံဘူးဆိုတဲ့ ရှော့ခ်က အရင်လာပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ငြင်းပယ်တာပါ။ ကိုယ့်မှာ ကုမရတဲ့ AIDS ရောဂါရှိနေပြီဆိုပါတော့။ ငါ့မှာ ဒီရောဂါမရှိပါဘူး။ ငါနေကောင်းနေတာပဲ၊ ကျန်းမာနေတာပဲ ဆိုတာမျိုးပေါ့။ အဲ့ဒီတော့ တခြားဆရာဝန်ဆီသွားပြတယ်။ ဒါဟာ ငြင်းတာပါ။ Personal Crisis မှာ ငြင်းဆိုမှု လုပ်ကြရပါမယ်။
ပြီးတော့မှ နေ့ခင်းအိမ်မက်တွေ၊ စိတ်ကူးယဉ်တာတွေ၊ စိတ်ဓါတ်ကျတာတွေ လာပါလိမ့်မယ်။ ရှက်တယ်၊ စိတ်ပူတယ်ဆိုတာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေပြီးတော့မှ လက်ခံပါတယ်။ AIDS ရောဂါ ငါ့မှာတော့ ရှိနေပြီ၊ အဲ့ဒါကို ဘယ်လိုကုစားမလဲ။ ဒါမှ Crisis Management ပါ။
Crisis Management ဟာ ဒီကဏ္ဍတွေ ပြီးသွားမှ စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်တယ်၊ ကောက်ချက်ချတာလုပ်တယ် ဆိုတာမျိုးပါ။ ဒါဟာ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းအနေနဲ့ ပြောနေတာပါ။
ဒီတော့ အဲဒီလိုဖြစ်ရင် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းက အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေ အကျပ်အတည်းဖြစ်နေတာသိရင် နားထောင်ပါ။ သူ့ကို နွေးထွေးအောင် စောင့်ရှောက်ပေးပါ။ သူနဲ့စကားပြောပေးပါ။ Crisis ဖြစ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ ဥပမာ – သူအလုပ်ပြုတ်လာတာကို ပြောချင်မယ်။ သူ့မှာ မကျေနပ်ချက်တွေရှိမယ်၊ ဒေါသတွေ ရှိမယ်၊ ငြင်းဆိုတာတွေရှိမယ်။ ငါအလုပ်မပြုတ်သေးပါဘူး။ ငါ့လူကြီးက ငါ့ကို ပြန်စဉ်းစားဦးမှာပါဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ အလုပ်ပြုတ်နေပြီဖြစ်ပေမယ့် မပြုတ်သေးဘူးထင်ပြီး ငြင်းချက်ထုတ်နေတာပါ။
နောက်တစ်ခုက လူဆိုတာ တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ လောကမှာ HIV/AIDS ဖြစ်တာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း၊ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်နေတဲ့သူတွေ အများကြီးပါ။ အလုပ်ပြုတ်တာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်ပြုတ်တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာမျိုး စဉ်းစားရပါမယ်။
ပြီးတော့မှ Crisis Management က Positive action နဲ့ လာပါမယ်။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ နာကျင်မှု၊ ကိုယ်ကြောက်နေတာတွေကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေနဲ့ ဖြေရှင်းကြရပါမယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာရော၊ ခရစ်ယာန်ရော၊ အစ္စလာမ်ရော ဘာသာအားလုံးအတွက် ဆုတောင်းခြင်းက အကောင်းဆုံးပါ။ Personal Crisis မှာ ဆုတောင်းခြင်းရဲ့ အင်အားကိုလည်း လျှော့တွတ်လို့မရပါဘူး။
Personal Crisis နဲ့ပါတ်သတ်လို့ Model တစ်ခုရှိပါတယ်။ ပထမဆုံးက လှုံ့ဆော်မှုပါ။ လုံးဝကုလို့မရတဲ့ရောဂါဖြစ်ပြီ၊ Crisis ဖြစ်ပြီ၊ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်ပြုတ်ပြီ ဒါမှမဟုတ် အိမ်ထောင်စုထဲမှာ အကွဲအပြဲတွေဖြစ်ပြီဆိုရင် လှုံဆော်မှုပေးတာကို ကိုယ်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ။
Personal crisis management မှာ သတိထားရမှာတစ်ခုက အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်လို့ လှုံဆော်လာတာနဲ့ တုံ့ပြန်တာကြားမှာ ကွက်လပ်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဖြစ်တာနဲ့ ချက်ချင်းတုံ့ပြန်စရာ မလိုပါဘူး။ ဥပမာ – ဒေါသထွက်တယ်ဆိုပါစို့။ ဒီဒေါသက ထွက်စရာမလိုပါဘူး။ ဒေါသထွက်တယ်လို့ ပြောရင် ဒေါသထွက်ဖို့ ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါသထွက်တယ်။ မထွက်ဘူးဆိုတာကို ရွေးဖို့အချိန်ရှိပါတယ်။ ၀မ်းနည်းမလား၊ ၀မ်းသာမလား၊ ပူဆွေးမလား၊ ဒေါသဖြစ်မလား အားလုံးဟာ ကိုယ်ရွေးလို့ ရတာချည်းပါပဲ။ တချို့က ရွေးစရာမရှိဘူးထင်ပြီး ဖြစ်တာနဲ့ တုံ့ပြန်တတ်ကြပါတယ်။ Freedom to Choose က ရွေးနိူင်အောင် ပေးထားတာပါ။
Self-awareness က တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိတာ၊ သိအောင် ဆင်ခြင်တာပါ။ အဲ့ဒီလို ဆင်ခြင်လိုက်တာနဲ့ ဒေါသတွေပျောက်သွားပါမယ်။ လူတစ်ယောက်မှာ ဦးနှောက်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း အတွေးနှစ်ခုကို တစ်ချိန်တည်းမှာ မခံနိူင်ပါဘူး။ အဲ့ဒီတော့ ဦးနှောက်က ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်သိအောင် ကြိုးစားလိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက် ဒေါသထွက်တာ ပျောက်သွားမှာပါ။
တစ်ချို့ကတော့ imagination ပါ။ ကိုယ့်ဘာသာ စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ conscience ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို ကိုယ်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့ independent will ပါ။ Independent will ကို လျှော့မတွက်ပါနဲ့။ ကိုယ့်မှာ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် အပြည့်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကို မမေ့ပါနဲ့။ တစ်ချို့က “ ကျွှန်တော့်မှာ ရွေးစရာမရှိဘူး” လို့ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒါ မဟုတ်ပါဘူး။ ရွေးစရာတွေရှိပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲခက်ခက်၊ ဘယ်လောက်ကြီးများတဲ့ Crisis ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်မှာ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဥပမာ – HIV/AIDS ရောဂါဖြစ်ရင် သေမယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲ့ရောဂါဖြစ်လို့ ARV Treatment ယူရင် မသေတော့ပါဘူး။ Treatment ယူမယ်၊ မယူဘူးဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်မှုပါပဲ။ ကိုယ့်မှာရှိတာကို လက်ခံလိုက်တာဟာ လွပ်လပ်စွာရွေးချယ်မှုပါ။ ဒါတွေအားလုံးကို ကိုယ်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။
83% of companies will faceacrisis
That negatively impacts the profitability ofacompany 20 to 30%
အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်း Crisis တွေ ရှိကြပါတယ်။ UK မှာ သူတို့တွက်ကြည့်ထားတာ ရှိပါတယ်။ နောက်လာမည့် ၅ နှစ်အတွင်း ကုမ္ပဏီ ၁၀ ခုရှိရင် ၈ ခုမှာ Crisis ရှိနိူင်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကတော့ အတတ်အကျရှိမယ်၊ policy ကလည်း ဒီနေ့တစ်မျိုး၊ နောက်နေ့တစ်မျိုး၊ လုပ်ရတဲ့သူက ဟိုပြေး ဒီပြေးဆိုရင် Crisis ရှိမှာပါပဲ။ အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင် သူ့ရဲ့ profit margin က ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ထိခိုက်မှုရှိနိူင်ပါတယ်တဲ့။ Organisational Crisis ကို အပေါ်ယံအနေနဲ့ မစဉ်းစားပါနဲ့။
A new field of management
Forecasting potential crises and planning to deal with them, e.g., how to recover if your computer system completely fails
Completingacrisis management plan before they experienceacrisis
Crisis management အကြောင်းပြောရင် ကြိုပြီး စဉ်းစားလို့ရပါတယ်။ ဖြစ်လာနိူ်င်တဲ့ အကျပ်အတည်းကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ Plan တွေ ကြိုင်ပြင်ထားလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ – ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာ computer system က ကျသွားပြီ ဆိုပါစို့။ ဒါဟာ crisis ပါပဲ။ အဲ့ဒါကို Backup တွေ၊ Plan A, B စတာတွေနဲ့ ကြိုပြီးပြင်ထားလို့ ရပါတယ်။
အခု ဒီက တချို့ကုမ္ပဏီတွေမှာဆိုရင် Crisis management Plan- CMP ဆိုတာ လုပ်ထားလာကြပါပြီ။ Crisis မစခင်ကတည်းက Plan ရှိဖို့လိုပါတယ်။ CMP ကို Crisis ပြီးမှ တရေးနိူး ထလုပ်ရင်တော့ ဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ Crisis Management Plan တွေကို ပြုစုလို့ရတယ်ဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။
Identifying the real nature ofacurrent crisis,
Intervening to minimize damage and recovering from the crisis
Strong focus on public relations to recover damage to public image and assure stakeholders
Crisis management မှာ ပထမဆုံး ခွဲခြားရွေးထုတ်နိူင်ရပါမယ်။ အဖွဲ့အစည်းမှာ အခု တကယ်တွေ့နေရတဲ့ crisis က ဘာလဲဆိုတဲ့ နားလည်မှု လိုပါတယ်။ အဲ့ဒီနားလည်မှုရဖို့က ချို့ယွင်းချက်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိူင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ် ဥပမာ – ဆရာဝန်တွေ diagnosis မှားရင်၊ စမ်းသပ်မှုမှားရင် ပေးတဲ့ဆေးလည်း မှားသွားနိူင်ပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ organization မှာလည်း တကယ့်ချို့ယွင်းချက်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခွဲခြားနိူင်ရပါမယ်။
Diagnosis ရရင် ၀င်ပြီး ဖြေရှင်းရမယ်။ ပြန်လည်ထူထောင်နိူင်အောင် လုပ်ရမယ်။ ဒါတွေလုပ်တဲ့အခါ လုံးဝမထင်မှတ်တဲ့အရာတစ်ခုကို သတိထားရပါမယ်။ Public relation ဆိုတဲ့ media ကို အလေးထားရပါမယ်။ ကိုယ့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ နည်းနည်းချို့ယွင်းလာလို့ နာမည်ပျက်သွားရင် အဲ့ဒါကို မကိုင်တွယ်နိူင်ရင်၊ public image ကျသွားရင် လုပ်ငန်းထိခိုက်နိူင်ပါတယ်။ ဒါကို သတိထားဖို့လိုပါတယ်။
Crisis Management ကို ဒီမှာလည်း သင်ရိုးညွန်းတမ်းတွေဆွဲပြီး သင်သင့်ပါတယ်။ နာဂစ်ကြောင့် သင်သင့်တယ်လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ organization တွေမှာ ရှိနေတဲ့အတွက် သင်သင့်တယ်လို့ပြောတာပါ။
Crisis management မှာ ကျွှမ်းကျင်မှုတွေရှိမယ်၊ နည်းလမ်းတွေရှိမယ်၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာတွေရှိမယ်။ ပထမဆုံး ချင့်တွက်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းမှာ ဘာဖြစ်နေလဲ၊ ဘာအကျပ်အတည်းရှိသလဲဆိုတာကို ချင့်တွက်ရပါမယ်။ ပြီးရင် နားလည်သဘောပေါက်မှုလိုပါတယ်၊ ပြီးမှ ဒါကို ကိုင်တွယ်ပုံလိုပါတယ်။ ဖြစ်ဖြစ်ချင်း လုပ်ရပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ reality နဲ့ perception ကို သတိထားစေချင်ပါတယ် တကယ်ဖြစ်နေတာနဲ့ အယူအဆနဲ့ဟာ တစ်ခါတလေမှာ ကွဲပြားနေတတ်ပါတယ်။ ကွဲပြီဆိုရင် ပြသနာဖြစ်လာပါပြီ။ Reality ဆိုတာမှာ “ဒါက ဒီလိုဖြစ်ရင် လူတိုင်းက ဒီလိုပဲမြင်မယ်” လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ အယူအဆက သပ်သပ်၊ အစစ်အမှန်က သပ်သပ်ပါ။သူ့အယူအဆကို ကိုယ်သွားပြောလို့မရပါဘူး။ သူ ဒီလိုပဲ စဉ်းစားမယ်၊ သူ ဒီလိုပဲ မြင်မယ်။ ဒါကို မှားတယ်၊ မှန်တယ် သွားပြောလို့ မရပါဘူး။ သူမြင်တဲ့ပုံစံကို ကိုယ်နားလည်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ reality နဲ့ သူ့ရဲ့ perception က မတူဘူးဆိုတာကို ကိုယ်သိအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
Systematic attempt to avoid crises or to manage those crises events that occur
Crisis management က စနစ်တကျ ရှိပါတယ်။ လုပ်ငန်းတွေမှာ crisis မပေါ်အောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ Crisis ဖြစ်မှ လုပ်တာထက် မဖြစ်ခင်ကတည်းက ကြိုပြီး လုပ်လို့ရတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဖြစ်ပြီးရင်တော့ ဒါကို နိူင်နိူင်နင်းနင်း စီမံခန့်ခွဲနိူင်ရပါမယ်။ ပြီးမှ Incident management ပေါ့။ incident management ကို Crisis management လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ငွေလာညှစ်တယ်ဆိုရင် ဒါဟာ Crisis ပါပဲ။ လာဘ်ထိုးရတယ်ဆိုရင်လည်း Crisis ပါပဲ။ ဒါကို ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့အရာလို့ မယူဆစေချင်ပါဘူး။ Business Culture မှာ လာဘ်ထိုးရတယ်ဆိုတာမျိုး မရှိသင့်ပါဘူး။ ဒါ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ လွှဲပြောင်းယူတာတွေရှိတယ်ဆိုတာမျိုးရှိမယ်၊ တခြားကုမ္ပဏီက ကိုယ့်company လာသိမ်းတာရှိမယ်၊ အကြမ်းဖက်တာတွေရှိမယ်၊ ကွန်ပျူတာနဲ့ပါတ်သတ်ရင် copyright တွေရှိမယ်၊ သတင်းအဖျက်အမှောင့် လုပ်တာတွေရှိမယ်။ Natural disasters နဲ့ Computer Tampering လည်း ရှိပါမယ်။
နောက်တစ်ခုက လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ပြန်ပေးဆွဲတာတွေလည်း နိူင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာရှိပါတယ်။ ဒီမှာတော့ ဒါမျိုးတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ဒါတွေအားလုံးဟာ Crisis တွေပါပဲ။ Organizational crisis တွေဟာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ရှိနေပါတယ်။
Organizational crisis ကို စဉ်းစားရင် ကိုယ့်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ၄ မျိုးရှိပါတယ်။
Sudden မထင်မှတ်ပဲ ချက်ချင်းဖြစ်တာမျိုးရှိပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးက Smoldering တငွေ့ငွေ့နဲ့ ဖြစ်တာမျိုးပါ။ အစတုံးကတော့ သေးသေးလေးနဲ့စတာပါ။ နောက်မှ ကြီးလာတာကတော့ လူတွေက သတိမထားမိကြလို့ပါပဲ။ နောက်တစ်ခုက Bizarre ထူးခြားဆန်းကြယ်တာမျိုးပါ။ တစ်ခါမှ မဖြစ်ဖူးတာမျိုးပေါ့။ ဥပမာ – အမေရိကားမှာ fast-food ရောင်းတယ်ပေါ့။ အဲ့ဒီ fast-food ထဲမှာ လက်ညှိုးတစ်ချောင်း သွားတွေ့တယ်။ အဲဒီမှာ chain တစ်ခုလုံး ဒုက္ခရောက်တော့တာပါပဲ။ ဒါဟာ မထင်မှတ်ဘဲဖြစ်တဲ့ Crisis ပါပဲ။ နောက်ဆုံးတစ်ခုက perpetual ပါ။ မပြီးစီးနိူင်တဲ့ပြသနာတွေပေါ့။ လုပ်ငန်းတွေမှာ မပြီးနိူင်တဲ့ပြသနာတွေ အမြဲတမ်းရှိပါတယ်။
ဒီတော့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ သတိထားရမယ့်အချက်က Crisis တစ်ခုဖြစ်ရင် ကိုယ့်လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်း ထိတာမဟုတ်ပါဘူး။ တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ လူအဖွဲအစည်းကိုပါ ထိခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် media relations လိုလာပါတယ်။ ပြီးမှ ပြန်လည်ထူထောင်မှု လုပ်ရပါတယ်။ နည်းပညာအနေနဲ့တော့ CMF – Crisis Management Framework ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ တချို့လုပ်ငန်းတွေမှာ လက်ရှိ management structure ကိုသုံးပြီး တည်ထောင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပြီးမှ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွင်းထဲနဲ့ တခြားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေ တည်ဆောင်ပါတယ်။ ဒီမှာဆိုရင် ကွန်ပြူတာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအနေနဲ့ စဉ်းစားသင့်တာတွေ ရှိပါတယ်။ computer brake off ဖြစ်ရင်၊ System brake off ဖြစ်ရင်၊ အင်တာနက်ကျသွားရင် လယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာတွေကို ကြိုပြင်ဆင်ထားတာတွေ မလုပ်ခဲ့ရင်၊ တုန့်ပြန်တာနှေးခဲ့ရင် အများကြီး ထိခိုက်နိူင်စရာရှိပါတယ်။
Organizational crisis နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး တခြားနိူင်ငံက ဥပမာတွေကို ကြည့်ကြရအောင်ပါ။ အိန္ဒိယနိူင်ငံ Bhopal မှာ Chemical pollution အကြီးအကျယ်ဖြစ်တော့ လူတွေအများကြီးသေပါတယ်။ အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်မှာ သင်ခန်းစာယူစရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ပထမဆုံးအချက်က ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေ ညံ့ပါတယ်။ မဖြစ်ခင်လည်း ညံ့ပါတယ်၊ ဖြစ်နေစဉ်မှာလည်း ညံ့တယ်၊ ဖြစ်ပြီးတော့လည်း ညံ့ဆဲပါပဲ။ ပိုဆိုးတာက Chemical poison တွေဖြစ်ရင် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေကို အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတဲ့အတွက် အိန္ဒိယလူမျိုးတွေ မဖတ်တတ်တာပါပဲ။
Company မှာ အားလုံးနားလည်အောင် လုပ်ပါလို့ပြောထားပေမယ့် ရေးထားတဲ့ manuals တွေ၊ guidelines တွေ အားလုံးက အင်္ဂလိပ်လိုတွေ ဖြစ်နေတော့ အိန္ဒိယလူမျိုးလုပ်သားတွေ တစ်ယောက်မှ မဖတ်တတ်သလို ပတ်ဝန်းကျင်က ရွာသားတွေလည်း မဖတ်တတ်ကြတော့ poison တွေ ဖြစ်နေမှန်းသိပေမယ့် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေကြတော့တယ်။
အဲ့ဒီမှာ အမေရိကားက Union Carbide management က ချက်ချင်းအပြေးရောက်လာပါတယ်။ ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲ အိန္ဒိယအစိုးရက မင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ရတာဆိုပြီး ချက်ချင်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်။ တကယ်တော့ သူတို့လာတာက recovery လုပ်ဖို့လာကြတာပါ။ နောက်တစ်ခုက company ပိုင်ရှင်တွေဟာ မြင်သာရုံသက်သက်ပဲ လုပ်တာပါ။ တကယ်တမ်း တစိုက်မတ်မတ်လုပ်တာမဟုတ်တော့ counterproductive ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်မှာ ဘာသင်ခန်းစာရလိုက်သလဲဆိုတော့ multinational ဆိုတဲ့ နိူင်ငံတစ်ခုထဲမှာတင်မဟုတ်ပဲ နိူင်ငံအများကြီးမှာလုပ်တဲ့ company တွေဟာ management standard ကို သတိထားရပါမယ်။ တစ်နေရာမှာ သုံးလို့ရတဲ့ management standard တွေဟာ နောက်တစ်နေရာမှာ သုံးလို့ရ၊ မရ ပြောင်းရွှေ့ပြီး လုပ်လို့ ရ၊ မရဆိုတာ စဉ်းစားရပါမယ်။
Ford and Firestone Tire and Rubber Company (2000)
Recalled 6.5 million tires
Committed three major blunders
Blamed consumers for not inflating their tires properly
Blamed each other for faulty tires and faulty vehicle design
Said very little about what they were doing to solveaproblem that had caused more than 100 deaths
ဒီနေရာမှာ Ford ကား company နဲ့ Firestone တာယာ company ကြားမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ support crisis အကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ Ford ကားတွေမှာ သုံးတဲ့ 4/4 တာယာတွေ မကောင်းတဲ့အတွက် ပေါက်ထွက်ပြီး လူတွေအများကြီး သေရပါတယ်။ အဲ့ဒီလို လူတွေအများကြီး သေတဲ့အတွက် Firestone company ဟာ တာယာခြောက်သန်းခွဲလောက်ကို ပြန်ပြီး ရုပ်သိမ်းပေးရပါတယ်။ သေဆုံးသူအရေအတွက်နည်းတယ်၊ များတယ် ဆိုတာထက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြစ်တင်နေကြပါတယ်။ (တာယာ company)
Posted by Alex Aung at 10:16 AM No comments: